ရငျဘတျ အတှငျးက ကှကျလပျလေးတဈခု – My Blog
ရငျဘတျ အတှငျးက ကှကျလပျလေးတဈခု
မဇငျ…အတူးလေးအိပျသှားပွီလား… အိပျသှားပွီတဇေ…မငျးရော မအိပျသေးဘူးလား… ဧညျ့ခနျးထဲရှိထငျးမိုးဖိုလေးရှတှေ့ငျ မီးဖို ကအလငျးရောငျရယျ နံရံကပျမီးအဝါလေးတှရေဲ့ မစို့မပို့ အလငျးရောငျထဲ မှေးပှကျောဇျောပျေါထိုငျကာ ဆိုဖာကိုမီထားသညျ့ စိုး တဇေ အမေးကိုဖွလေညျးဖွသေလို ဇငျမိုးသူ အနိမျ့သံလေးဖွငျ့ ပွနျလညျ မေးလိုကျလသေညျ… စိုးတဇေလညျး အသားဖွူဖွူ မှာ နကျပွာရောငျဆှယျတာလေးနဲ့ လိုကျဖကျလှတဲ့ ဇငျမိုးသူကို မော့ကွညျ့နရေငျး… အကွညျ့ပွနျလှဲလိုကျကာ ကြှနျတျောစဉျးစား နတော…မဇငျတို့သားအမိဘာလို့ ပွငျဦးလှငျကိုလိုကျလာတာလညျးလို့ အမကိုတဈခှကျလောကျတိုကျပါလား တဇေ မှနျစားပှဲပု ပျေါရှိ စိုးတဇေသောကျလကျစ ဝိုငျပုလငျးနှငျ့ ဖနျခှကျကိုကွညျ့ပွီးမေးလိုကျကာ စိုးတဇေမီထားသညျ့ ဆိုဖာပျေါတှငျ ညှငျသာစှာ ထိုငျခလြိုကျသညျ…ပိနျ ပါးသှယျလတြဲ့ မဇငျခန်ဓာကိုယျလဟော ဆိုဖာပျေါကွှကွှလေးဖွငျ့ အရုပျလေးတငျထားသလို လှပ နသေညျ… စိုးတဇေလညျး ဇငျမိုးသူကို ခေါငျးငွိမျ့ပွကာ ခါးဆနျ့ရငျး ထမငျးစားခနျးက ဝိုငျဖနျခှကျ တဈခှကျထယူကာ ဝိုငျငှဲ့ပေးပွီး ဇငျမိုးသူကို ပေးလိုကျလသေညျ….ဇငျမိုးသူ ဖနျခှကျ တဈဝကျစာ ဝိုငျကို ဆကျတိုကျတဈကြိုကျထဲ မော့သောကျလိုကျရာ…မကျြနှာ လေးမြား သှေးရောငျလှမျးတကျသှားလသေညျ…ပွီးနောကျ…
ဒီနေ့ ကိုမငျး… မဇငျအသံလေးတုနျဝငျသှားပွီး သူကိုယျတိုငျ ဝို ငျထပျငှဲ့ကာ ၂ ငုံစာလောကျသောကျခလြိုကျပွီး ဖနျခှကျကိုငျထား သညျ့လကျမြား တုနျနကော…မကျြရညျစကျမြား ပိုးပိုးပေါကျပေါကျကလြာလသေညျ…. စိုးတဇေလညျး ဇငျမိုးသူလကျထဲမှ ဝိုငျခှကျ ကို အေးစကျနသေညျ့လကျခြောငျးရှညျရှညျလေးတှကေို ဖှဖှလေးဖယျကာ ယူလိုကျပွီး စားပှဲပျေါတငျပွီး…. ဟုတျတယျ ဒီနကေို့ မငျးဆုံးတာ ၄ နှဈပွညျ့တယျ…ကြှနျတျောတောငျးပနျပါတယျ မဇငျရယျ ကြှနျတျော စိတျလိုကျမာနျပါ အိမျကထှကျမလာသငျ့ဘူး…မ ဇငျတို့နားမှာနပေေးသငျ့ပါတယျ…ကြှနျတျောထှကျလာရ တယျဆိုတာကလညျး…ကြှနျတျောမရှိလညျး မဇငျတို့သားအမိ နသေားကြ လောကျပွီထငျတာရယျ… ကြှနျတေျာ့ နှလုံးသားကို စုတျတံတှကွေား ထဲပွနျမွုပျထားပွီး ကြှနျတျောကိုယျ ကြှနျတျော ကုစားဖို့အခြိနျ ယူခငျြတာရယျ…နောကျပွီး ဒီ ၄ နှဈလုံးအတူနသေလို ဆကျမနပေမေယျ့လညျး အဝေးကနစေောငျ့ရှောကျပေးမယျဆိုတာကွောငျ့ ပါ…ကြှနျတျော မဇငျကိုလညျး ဖှငျ့မပွောဘဲထှကျလာခဲ့မိတာ မဇငျနဲ့ အတူးလေး ဝမျးနညျးသှားရတယျဆိုရငျတောငျးပနျပါတယျ…
စိုးတဇေ… ဇငျမိုးသူ ကို ဝမျးနညျးစှာပွောလိုကျလသေညျ…သူကိုသူလညျးစိတျထဲအပွဈတငျနမေိလသေညျ.. တကယျတော့ ခုလို ထှကျလာရတာလညျး ကြှနျတျော….မ လုပျ ခငျြ ဆုံး အလုပျပါ မဇငျ… စိုးသူရ မဇငျပေါငျပျေါ ခေါငျးအပျကာ ရငျထဲကနာကငျြနပွေီး ငိုသံမထှကျမိအောငျထိမျးရငျး အရှိုကျပွငျးပွငျးအသကျရှုနသေညျ….စိုးတဇေသူ့မကျြရညျတှကေိုတော့ မထိမျးနိုငျ… ဇငျမိုးသူ သညျ.. သူ့ခညျြသား ဘောငျးဘီပျေါကလြာတဲ့ စိုးတဇေ မကျြရညျပူတှကေို ခံစားမိလသေညျ…. ဇငျမိုးသူ စိုးတဇေ ခေါငျးကိုမော့ စလေိုကျပွီး…ကွညျ့ကာပွောလိုကျသညျ… တဇေ နောကျ မဇငျနဲ့ အတူးလေးကို ထားခဲ့ပွီးထှကျမသှားပါနဲ့…တဇေသှားခငျြတဲ့ဆီရှိ ရငျလညျး အမတို့ သားအမိကို ချေါသှားပါ…ဒါ မဇငျရငျထဲပွောတာပါ တဇေခေါငျးငွိမျ့ပွလိုကျပွီး…
ဟုတျကဲ့ပါမဇငျ…ကြှနျတျော ကတိပေးပါတယျ လာ ဆိုဖာပျေါတကျ ခှကျခငျြးတိုကျရအောငျ… စိုးသူရလညျး ရငျထဲ မှနျးကွပျသညျမြား ခဏတာ ပေါ့သှားသလို ခံစားရပွီး အပြျောလေးမြား ရုတျတရကျ ခုနျပေါကျဝငျလာသညျဟု ခံစားမိလသေညျ… ဝိုငျခှကျတှထေဲ ဝိုငျငှဲ့ကာ ဇငျမိုးသူကို တဈ ခှကျပေးပွီး သူ ကိုယျတိုငျတဈခှကျကိုငျကာ.. မခှဲကွေး ဆိုကာ မဇငျပွောသလိုလိုကျပွောပွီး ဖနျခှကျခငျြး တိုကျကာ မော့သောကျ လိုကျကွလသေညျ.. တဇေကို မဇငျမေးစရာရှိတယျ…အမှနျတိုငျးဖွရေမယျနျော စိုးတဇေ ခေါငျးငွိမျ့ပွရငျး ဇငျမိုးသူ မေးမှာကို စိတျဝငျစားစှာနားထောငျလိုကျသညျ… မငျး မဇငျကို ဘယျတုနျးထဲက စိတျဝငျစားနတောလညျး စိုးတဇေ အာစေးမြားကပျသှား သညျ…တကယျတော့ဒီမေးခှနျးက သူ့အတှကျ အလှယျဆုံးမေးခှနျး…သူ ၆ တနျးမတကျခငျ ၊မဇငျ သညျ ၉တနျးမတကျခငျဖွဈသညျ့ နှရောသီ မှာ မဇငျတို့မိသားစု သူတို့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျအိမျကိုပွောငျးလာကွတယျ…
အရငျက မဇငျမမေနေဲ့ စိုးတဇေတို့မမေနှေငျ့ နယျမှာတဈကြောငျးထဲအတူပွီးခဲ့ကွတဲ့ ငယျသူငယျခငျြးအရငျးကွီးတှေ…မဇငျတို့ မိသားစု မန်တလေးပွောငျးလာမယျဆိုတော့ စိုး တဇေတို့ အမတေိုကျတှနျးမှုကွောငျ့ ရှခွေံ့ကိုဝယျဖွဈခဲ့တာလညျးဖွဈသညျ…မဇငျ မမေနေဲ့ မဇငျရယျ အိမျတကျဖိတျစာလေးလာ ပေးတဲ့နေ့ သူလှကေားအပျေါကနမေဇငျကိုခြောငျးခဲ့တယျ .. ဆံပငျရှညျလေးကို နောကျလှနျကာ ဘီးကုတျပနျးရောငျလေးကုတျထား ပွီး ပနျးရောငျ တီရှပျလေးရယျ…အောကျဖကျက အဖွူရောငျ ခွသေလုံးလောကျထိရှိသညျ့ စကပျလား ဂါဝနျချေါမလား ပှပှလေး ရယျ ရိုးရိုးလေးနဲ့ သူ့မကျြစိထဲခဈြစရာကောငျးနသေညျ့ အမတဈယောကျ…ပွီးတော့ စိုးတဇေရဲ့ အခဈြတျော ကွောငျးဝတုတျ ဖိုးဝါ လေး ကို ပေါငျပျေါတငျကာ ပှတျပေးနသေညျ။
သူ့လိုကွောငျခဈြတတျတဲ့ အမ။ ခွံထဲက ဒနျးအဖွူလေးပျေါ ဖိုးဝါလေးကို ခြီသှားပွီး စီးကာ ပြျောနတေဲ့ မဇငျကို အိမျပျေါထပျမှနျပွတငျးကခြောငျးနစေဉျ သူ့ရငျထဲ နှေးထှေးသှားတာလား ရငျခုနျသှားတာလားမသိ ရုတျခွညျးအမညျနာမ တတျမရအောငျခံစားမှုအသဈခံစားလိုကျရလသေညျ……ဒါတှေ သူ မဇငျကို စီကာပတျကုံးပွောပွလိုကျခငျြ သညျ…..တကယျတော့ ဟိုးအရငျ သူနှငျ့ မဇငျ လကျမထပျခငျ ၄ နှဈမတိုငျခငျ ၈နှဈ ၉ နှဈလောကျထဲကပွောပွခငျြခဲ့သညျ…ပွောခှငျ့ မရခဲ့။ သူ့ကိုယျသူ ထိမျးသိမျးထားခဲ့သညျက ပိုမှနျသညျ။
ခုမေးလပွေီ…သူဆကျထိမျးထားသငျ့သလား…ပွောလိုကျသငျ့ပွီလား… တှဝေနေသေညျ…ရုတျတရကျ မဇငျကို အသကျထကျခဈြ သညျ့ အဈကိုဖွဈသူ ကိုမငျးသူရိနျ မကျြနှာကိုလညျး မွငျမိလသေညျ….. စိုးတဇေ ဝိုငျတဈကြိုကျသောကျလိုကျကာ သူ့ခွထေောကျ ကိုသူကွညျ့ရငျး ဇငျမိုးသူမကျြဝနျးတှကေို ရှောငျကာတိတျဆိတျ နလေသေညျ…ဇငျမိုးသူ… စိုးတဇေ ရဲ့ ခံစားခကျြကို နားလညျ သဖွငျ့…သူ့ဖကျကလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောသငျ့ပွီဟုတှေးကာ… စိုးတဇေ လကျကိုကိုငျကာ… တဇေအနနေဲ့ ဖွရေခကျနေ ရငျ…ကိုမငျး နောကျဆုံးနှုတျဆကျတဲ့နကေ့ သူပေးခဲ့တဲ့ စာလေးကိုဖတျပွီးမှ တဇေစိတျထဲရှိတဲ့အဖွကေိုပေးပါ…မဇငျလညျး ဒီစာ ဖတျပွီးတော့ တဇေ့ဆီလိုကျလာခဲ့တာပဲ…ရော့
ဇငျမိုးသူ ဘောငျးဘီအိတျထဲမှ စာအိတျသေးသေးလေးကို စိုးတဇေ လကျထဲထညျ့ပေးလိုကျသညျ…စာအိတျလေးပျေါတှငျ ဇငျလေး တကယျလို့ အကိုပွနျမလာလို့ ၃ နှဈကွာရငျ ဖတျဖို့ ဆိုပွီး ရေးထားလသေညျ။ ခု ၄နှဈရှိပွီ…မဇငျ ဒီစာကို ၄ နှဈထိစောငျ့ပွီးမှဖတျခဲ့ တာပဲ …ဘာပါလိမျ့ ဇငျလေး… ဇငျလေးဒီစာကိုဖတျနပွေီဆိုရငျ ကိုမငျး ဒီလောကထဲကနေ အပွီးပြောကျကှယျသှားလို့ ၃ နှဈရှိနေ ပွီပေါ့။ အရငျဆုံး ဇငျလေးကို ကိုမငျး အသကျထကျပိုခဈြတယျဆိုတာယုံပါ။ ဇငျလေးနား တဈသကျလုံး နပေေးမယျဆိုတဲ့ ကတိ မတညျနိုငျတာကိုတော့ ခှငျ့လှတျပေးစခေငျြပါတယျ။ ကိုမငျး မရှိတဲ့နောကျ ဇငျလေး အတှကျ ကိုမငျးစိတျအခရြဆုံးနဲ့ ဇငျလေးကို ကိုမငျးလို ခဈြပေးနိုငျမယျ့သူဆိုလို့ ညီလေး စိုးတဇေပဲရှိမယျလို့ ကိုမငျး ထငျတယျ။ ဇငျလေး အိမျထောငျပွုမယျဆိုရငျ စိုးတဇေကို ပဲ ရှေးစခေငျြပါတယျ။ စိုးတဇေ ဇငျလေးကို ခဈြနတေယျဆိုတာ အကိုသိတယျ။
တမလှနျကနေ ဆကျခဈြနမေယျ့ ကိုမငျး စာဆုံးတော့ စိုးတဇေ သကျပွငျးခကြာ ဇငျမိုးသူအမေးကိုဖွလေိုကျလသေညျ….ဖွမေယျ ဆိုကာမှ…စကားစဖို့ ခကျနသေညျ…နောကျဆုံးမှာ ရငျထဲကစကားတှေ ပှငျ့ထှကျလာလသေညျ… ကြှနျတျော မဇငျကို ခဈြနတော… မဇငျတို့ အိမျတကျဖိတျစာလာပေးတဲ့နကေ့ထဲကပါ….ကိုမငျး က ကြောငျးဖှငျ့ခါနီး ရနျကုနျကကွီးတျောတို့အိမျကနပွေနျလာတော့ မ ဇငျကိုတှပွေီ့း မဇငျလှကွောငျးနဲ့ သူစိတျဝငျစားနကွေောငျ့ ညတိုငျးအိပျခါနီးတိုငျး မရိုးနိုငျအောငျ ကြှနျတေျာ့ကိုပွောခဲ့တယျ…ကို မငျးကို ကြှနျတျောသနားတယျ…မမေကေဆိုအမွဲပွောတယျ…သူ့သားကွီးဟာတဲ့ ငယျငယျတုနျးက ကံမကောငျးရှာ ဘူးတဲ့ မိဘတှေ စညျးပှားရေးပကျြတာနဲ့ ခြိနျကိုကျဖွဈပွီး…နထေိုငျစားသောကျ ခြို့တဲ့ခဲ့တယျတဲ့…ကြောငျးလညျး တဈနှဈနားခဲ့ရတယျ တဲ့….ကြှနျတေျာ့ကိုယျဝနျရလာခြိနျမှာ စီးပှားရေးပွနျ တကျလာခဲ့ပွီး အဖကေ ငါ့သားလေးပေးတာ ငါ့သားလေးပေးတာဆိုပွီး သူ့ ရှမှေ့ာပွောနပေမေယျ့ ကိုမငျးက ပွုံးပွီးအမွဲကွညျ့နခေဲ့တဲ့…
မနာလိုလညျးမဖွဈခဲ့ဘူး ကြှနျတေျာ့ကိုလညျး စောငျ့ရှောကျပေးခဲ့ တယျ…ကြှနျတျော ကိုမငျးကို သူခဈြသလိုအရမျးခဈြတယျ…ကြှနျတေျာ့ရငျထဲ မဇငျရောကျနပေမေယျ့ ကိုမငျးကလညျး မဇငျကို ရူးမ တကျဖွဈနတောမွငျရတော့ ကြှနျတျော နောကျထပျ ကောငျမလေးတှေ ခံစားလို့မရတော့မှနျးသခြောသိနတေယျ ဒါပမေယျ့ မဇငျကို ကိုမငျးနဲ့ကွညျဖွူစှာသဘောတူပေးခဲ့တာပါ…မဇငျတို့ ကိုမငျးတို့ပြျောနတောမွငျရငျ ကြှနျတျောလိုကျပြျောနိုငျအောငျပဲ ကွိုးစားခဲ့ တယျ… စကားအဆုံး.. စိုးတဇေ မီးဖိုထဲ ထငျးခြောငျးမြားထညျ့ရငျး နာရီတဈခကျြကွညျ့လိုကျသညျ….. ၀၀း၀၅ ဇငျမိုးသူ အနညျးငယျခမျြးသလိုဖွဈလာတာမို့ လကျမောငျးလေးတှကေို ပှတျပွီး ထလာကာ မီးဖို့ရှထေို့ငျခြ လိုကျပွီး လကျကို မီးလှုံကာ… ဒါဆို ၆ တနျးကထဲက မငျး မဇငျကို သဘောကနြတောပေ့ါ…ဒါကွောငျ့လညျး မဇငျ ကိုမငျးရဲ့ကိုယျဝနျရှိ နပွေီဆိုတာမငျးသိတာနဲ့ ခိုး ပွေးပွီး မဇငျအရှကျကို မငျးဘဝနဲ့ လဲပေးဖို့ ဝနျမလေးခဲ့တာပေါ့…ဟုတျလား..
စိုးတဇေလညျး ဇငျမိုးသူဘေးနား ဝငျထိုငျ လိုကျကာ…ဝိုငျခှကျလေးကမျးပေးလိုကျသညျ…သူလညျးမော့လိုကျသညျ… အဲ့တုနျးက အခွအေနကေ အရမျးရှုပျနတေယျ…ကို မငျးဆုံးလို့ ၂ လကြျောမှာ မဇငျ ကြှနျတေျာ့ကိုလာပွောတော့ ကြှနျတျောတျောတျော တုနျလှုပျသှားတယျ…တုနျလှုပျသှားတယျဆိုတာ မဇငျအနနေဲ့ ကိုမငျးမရှိဘဲ ဘယျလိုမှေးမလဲဆိုတာပဲ…ရှငျးရှငျးပွောရရငျ မဇငျနဲ့ ကိုမငျးတို့ ဆုံဖို့ ကြှနျတျော ပဲ လိုကျပို့ပေးခဲ့ရတာ လေ…အဲ့တော့ ဒီအတူးလေး လူဖွဈဖို့က ကြှနျတျောပါဝငျပတျသတျနတေယျ… ပွီးတော့ ကိုမငျး သှေးကိုမှေးစခေငျြတယျ…ဒါပေ မယျ့ ကိုမငျးက တိုကျပှဲမှာကနြခြေိနျ အလောငျးပွနျမရပမေယျ့ ဗုနျးထိပွီးမသရေငျတောငျ မွဈငယျမွဈထဲ ကလြို့ သဖေို့မြားတယျဆို ပွီး တပျရငျးက တပျရေးဗိုလျကွီး ကိုယျတိုငျအိမျလာပွောသှားတာဆိုတော့….
ကြှနျတျောခေါငျးထဲရှိတာကတော့ မဇငျကို ကြှနျတျော ခိုးပွေးမယျ…လကျထပျခငျြတယျ ခှငျ့တောငျးလညျးမဇငျခှငျ့ပွုမှာမှမဟုတျတာ…ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော အဲ့တုနျးက မဇငျကိုခိုးပွေး ခဲ့တာ…ဒါတှကွေောငျ့ဆိုပွီးပွောပွဖို့ ဆိုတာကလညျး… မဇငျရယျ…ပွနျပွောရငျ ကိုမငျးကို အရမျးသတိရတယျ…ကြှနျတျောရငျထဲ မကောငျးလို့… အဲ့တုနျးကလညျး မဇငျအပါအဝငျ မိဘ သူငယျခငျြး အားလုံး ဘယျလိုပဲထငျထငျဂရုမစိုကျဘဲ စတေနာသနျ့သနျ့နဲ့ ကြှနျတျောလုပျခဲ့တာပါ….အဲ့အတှကျနောငျတမရပါဘူး….ကနျြတာကတော့ ကြှနျတေျာ့ကံပေါ့…
ဇငျမိုးသူ ရငျထဲနငျ့သှားသညျ…ဒီ ၄ နှဈလုံး သူ့ရငျထဲကစကားတှေ တခှနျးမှမဟဘဲ ကိုမငျးနဲ့ သူ့သားလေးကိုလညျး တူဆိုတာထကျ တောငျပိုပွီး သားအရငျးလိုသူခဈြခဲ့တယျ…နာမညျခံပေးခဲ့တယျ…တကယျဆို အရှကျတကှဲဖွဈရမှာက သူ..ဒါပမေယျ့ သူ့အစား စိုး တဇေက အားလုံးရဲ့ အပွောအဆိုကိုခံကာ ပတျဝနျးကငျြအသဈဖွဈတဲ့ ရနျကုနျကို မန်တလေးကနေ သူ့ကိုချေါထုတျခွဲ့ပီး သူဝါသနာပါ တဲ့ ပနျးခြီဆှဲတာကို ဆကျမလုပျဘဲ သူတို့သားအမိကို လိုလသေေးမရှိစောငျ့ရှောကျထားပေးခဲ့တယျ….သူ့ကိုလညျး အဈမတဈ ယောကျလို လကျဖြားနဲ့မတို့ဘဲ စညျး စောငျ့ပေးခဲ့တာတှေ အပြျောအပါးအသောကျအစား နဲ့ အပေါငျးအသငျးတှအေတှကျ အခြိနျ လုံးဝအကုနျအမခံဘဲ
သူတို့ နဲ့သာ အခြိနျကုနျပွီး အတူးလေး နမေကောငျးခြိနျ တဈခါတဈရံသူနေ မကောငျးခြိနျတှမှော အနားကမ ခှာဘဲပွုစုပေးခဲ့တာတှဟော တျောရုံ သံယောဇဉျ မတ်ေတာတရားနဲ့ မလုပျ ပေးနိုငျမှနျး ဇငျမိုးသူ ခံစားမိသညျ….ငယျရှယျတဲ့၊ မိနျးကလေးတှေ သဘောကတြဲ့ ၊ ဝါသနာပါတဲ့အလုပျ စတဲ့ အခြိနျတှေ၊ ပတျဝနျးကငျြတှေ စှနျ့ပွီး သူ့တို့ကို စောငျ့ရှောကျဖို့တဈခုထဲနဲ့ လဲရဲခဲ့တဲ့ စိုးတဇေကို သူမွငျတိုငျးနစေဉျ သနားသလို သံယောဇဉျလညျး တှယျမိလသေညျ…သူ ကိုမငျးကို ခဈြသညျ….ဒါကွောငျ့ လညျး ကိုမငျးရှတေ့နျးမထှကျခငျ သူ့ဘဝကို ကိုမငျးဆီပေးခဲ့မိသညျ။
ကိုမငျး တပျရှိရာမွို့ကို စိုးတဇေကားမောငျးပို့ပေးကာ သှားခဲ့ကွပွီး… ဟျောတယျလေးမှာ နှဈဦးသား စကားတှအေလှမျးတှေ သယျ ရာကလေ မရညျရှယျဘဲ အခဈြတှဖေလှယျခဲ့ကွတယျ။ ကှနျဒုံးမပါပမေယျ့ ကိုမငျး အပွငျမှာ ပွီးလိုကျတာကို ယုံကွညျပွီး ဆေးမ သောကျမိခဲ့။ တကယျတော့ ကိုမငျးစဈထဲဝငျတော့ သူတားခငျြသညျ…ဒါပမေယျ့ ရှတေ့နျးစဈမကျြနှာပွငျက လူနာတှေနယျခွား က တောသူတောငျသားတှေ အတှကျ ရနျသူ မိတျဆှမေခှဲခွားဘဲ ငှကွေေးကွောငျ့မဟုတျ အာဏာကွောငျ့မဟုတျ သူဆေးကုပေး ခငျြတယျဆိုပွီး သူ့ဟီးရိုး Hacksaw Ridge လိုဆိုကာ စဈဆေးထဲ ဝငျသှားခဲ့သညျ…. စာခြုပျအတိုငျး စဈသကျ ၁၀ နှဈပွညျ့ရငျ တော့ တပျကထှကျပွီး သူနဲ့ အတူတူ နကွေမယျဆိုတဲ့ကတိစကားလေးရယျ… သူ့ရဲ့လေးစားဖှယျစိတျဓါတျကို သူမတားခငျြတော့ ဖွဈလာသမြှကံတရားလို့သာသူမှတျခဲ့သညျ…ကံက သူနဲ့ ကိုမငျးကိုခှဲလိုကျလပွေီ….
ခုသူဘာဆကျလုပျသငျ့ သလဲ သားလေး အတူး ကလညျး စိုးတဇေကို အဖရေငျးလိုခဈြနတေယျ…အဖလေိုပဲထငျနတေယျ… အားလုံးကလညျး မငျးတူးတူးအဖသေညျ စိုးတဇေလို့ပဲ သိထားကွသညျ….စိုးတဇေကလညျး သူနဲ့သားလေးကိုခဈြနတေယျဆိုတာ ခံစားမိတယျ…ထိုအခြိနျ စိုးတဇေက သူ့ကို စိတျတှေ အနညျထိုငျလောကျပွီဆိုကာ သူ့ကိုမွငျရငျ ကိုမငျးကို သတိရစိတျပိုခံစားရမယျဆိုပွီး….အိမျကထှကျသှားတော့ သူ့ရငျထဲ ရုတျတရကျ သူ့ကမ်ဘာလေးပွိုကှဲသှားသလိုခံစားရပွီး ဒီနှဈတှေ ကိုမငျးအစား စိုးတဇေကိုအားကိုးရငျးအားကိုးရငျးနဲ့ ရငျထဲမှာ ငွိတှယျမိလာသညျကို သိသိသာသာခံစားမိသှားသညျ…. တဇေ မငျး မဇငျကိုခဈြတယျဆိုတာ ဘာနဲ့သကျသပွေမလဲ ဇငျမိုးသူ သူ့ ကိုသနားလို့ ဒါမှမဟုတျ သူ့အကိုစကားနားထောငျပွီး လကျခံလိုကျတာမြိုးတော့ မလိုခငျြ…သူဖကျကဆုံးဖွတျထားတာရှိသညျ…သူ စိုးတဇေရဲ့ ခဈြမတ်ေတာတှကေို အသိအမှတျပွုပေးခငျြမိသညျ။
သူ့အခဈြတှကေို ပိတျလှောငျထားတာကနေ တံခါးဖှငျ့ပေးလိုကျပွီး သူရယျ စိုးတဇေရယျ သားလေး မငျးတူးတူးရယျ ၃ ယောကျသား တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဘာနံရံမှခွားမထားဘဲ လကျကနျြ ဘဝလေးမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျနကွေမယျလို့ တဈလမျးလုံးတှေးလာမိသညျ။ ဒါပမေယျ့ စိုးတဇေ သူ့ကို ခဈြတယျဆိုတာ သခြောဖို့ တော့ သူ့အတှကျအရေးကွီးသညျ…မသခြောလြှငျ စိုးတဇေ ဘဝအတှကျ သူ ပွနျကွညျ့ပေးသငျ့ပွီ…စိုးတဇေ ပွမယျ့ သကျသကေို သူစောငျ့နလေိုကျသညျ…. စိုးတဇေ မတျတပျရပျလိုကျပွီး… မဇငျခဏစောငျ့ ဆိုကာ အိမျပျေါတကျသှားလသေညျ….ဒီပွငျဦးလှငျ ကအိမျလေးသညျ…ကိုမငျးတို့ မိဘတှရေဲ့အိမျဖွဈပွီး ကိုမငျးရနျကုနျစဈဆေးကဆငျးပွီး ပွငျဦးလှငျ မှာသငျတနျးတကျခြိနျတှေ မှာ မိသားစုတှလောတှဖေို့နဲ့ ကိုမငျး နားဖို့ ဝယျထားတဲ့အိမျဖွဈသညျ။ စိုးတဇေရဲ့ ပနျခြီးခနျးလေးလညျးရှိလသေညျ။….. စိုးတဇေ ပွနျ ဆငျးလာတော့ လကျထဲ ပုံဆှဲ စာအုပျခပျကွီးကွီးပွားပွား တဈအုပျပါလာသညျ….ဇငျမိုးသူကို လှမျးပေးလိုကျလသေညျ…
ဇငျမိုး သူ ပထမဆုံးစာမကျြနှာဖှငျ့လိုကျရာ…ခဲပနျးခြီဖွငျ့ ဘီးကုတျလေးနဲ့ကောငျမလေးတဈယကျေ ဒါနျးလေးပျေါမှာ ကွောငျဝတုတျလေး ပေါငျပျေါတငျပွီး ပွုံးပွီးထိုငျနတေဲ့ ပုံလေးကိုတှလေ့သေညျ…. ပနျခြီကာလေးထောငျ့မှာ ကြှနျတျောရဲ့ခဈြသူ…ဆိုပွီး ရကျစှဲလေးနှငျ့ ရိုးရိုးလေး ရေးထားလသေညျ…. ဇငျမိုးသူ ရငျထဲလှိုကျခနဲဖွဈသှားလသေညျ….ဒါသူ့ပုံ အဲ့အခြိနျထဲက သူ့ကိုခဈြနခေဲ့တာလား စိုး တဇေရယျ…မငျးမြိုသိပျထားရတာဘယျလောကျတောငျ မြားပွီလဲ ကွာနပွေီလဲကှယျ…. ဇငျမိုးသူ စာအုပျလေးကို ဘေးကိုခကြာ စိုးတဇေကို လှမျးဖကျလိုကျလသေညျ…..ပွီးနောကျ စိုးတဇေ မကျြနှာကိုကွညျ့ကာ…. တဇေ မငျး မဇငျကို စကားတဈခှနျးပွောပါ လို့ပွောရငျ ခုခြိနျ မငျးဘာပွောမလဲ…ဟငျ စိုးတဇေ ဇငျမိုးသူမကျြလုံးတှထေဲက မကျြရညျကွညျလေးတှေ ကိုမွငျရခြိနျ…သူ့ရငျထဲ …အနှဈနှဈအလလ သူစောငျ့ထိမျးခဲ့တဲ့ စကားတဈခှနျး အတှကျ အတားအဆီးတှေ အရညျတှပြေျောကြ ကုနျပွီ…. ကြှနျတျော လေ…မ ဇငျ ကို….ခဈြတယျ….ဟိုးအရငျထဲကရော…အခုရော…နောကျရော…ခဈြနဦေးမှာပါ
မဇငျမကျြရညျမြား ကလြပွေီ…စိုး တဇေ လကျမလေးနှဈဖကျနဲ့ ပါးပွငျပျေါ စီးကသြမြှ မကျြရညျတှကေို သုတျပေးလသေညျ….မဇငျရဲ့ ရှိုကျကွိးတငငျငိုနတော ကွောငျ့ တသိမျ့သိမျ့တုနျရီနတေဲ့ မဇငျ ကိုယျလုံးသေးသေးလေးကို သူ့ရငျခှငျထဲထှေးပှထေ့ားလိုကျလသေညျ….မဇငျ နဖူးလေးကို သူနမျးခလြိုကျသညျ….မဇငျမကျြနှာလေးမော့လာပွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျ မကျြလုံးခငျြးစိုကျကွညျ့နရေငျး စိုးတဇေ ခေါငျး လေး ငုံဆငျးလာသညျကို မွငျတော့ ဇငျမိုးသူ မကျြလုံးလေးမိတျပွီး ငွိမျနလေိုကျသညျ….စိုးတဇေ နှုတျခမျးတှေ သူ့နှုတျခမျးတှကေို လာထိတော့ သူ့ရငျထဲ ခုနျတကျသှားလသေညျ….အခဈြတှအေပွညျ့နဲ့ အနမျးတှေ ဒီနှဈတှမှော သူလညျး တောငျးတနခေဲ့တာပါ…ကို မငျးလညျး သူ့ကိုခှငျ့လှတျမှာပါ…သူ့အတှေးပေါငျးမြားစှာကွောငျ့ နှုတျခမျးတှေ တငျးတငျးစိထားမိလသေညျ…..စိုးတဇေလညျး ဇငျ မိုးသူ စိတျဆိုးသှားပွီထငျကာ နှုတျခမျးခွငျးခှာပွီး ဇငျမိုးသူကို ကွညျ့လိုကျသညျ….ဇငျမိုးသူမကျြလုံးလေးပှငျ့လာပွီး…စိုးတဇေကို ဖွေးဖွေးလေးတှနျးလှဲလိုကျပွီး စိုးတဇေအပျေါ သူ့ ကိုယျလုံးလေးထပျကာ အပျေါကနေ ငုံပွီး စိုးတဇေ နှုတျခမျးတှကေို နမျးလိုကျ လသေညျ…
ဝိုငျကွောငျ့စိတျလှညျ့စားနခွေငျးမဟုတျသညျမှာ ဇငျမိုးသူသခြောသညျ သူ့ရငျခုနျသံရော စိုးတဇေရငျခုနျသံရော နှုတျခမျးခငျြးနမျးနေ စဉျ ကွားနမေိသညျ…စိုးတဇေ ဇငျမိုးသူကို ဖကျထားရငျး ထထိုငျလိုကျသညျ….ဇငျမိုးသူ ဖားလေးလိုကပျလြှကျလေး စိုးတဇေ ကိုယျ မှာကပျနသေညျ…အနမျးတှကေ တော့လုံးဝမလှတျနိုငျကွပေ…စိုးတဇေ ဇငျမိုးသူ ကိုယျလုံးပေါ့ပေါ့လေးကို ပငျ့သှားပွီး ဆိုဖာပျေါ တငျပေးလိုကျလသေညျ…ထို့နောကျ အခဈြနဲ့ဝိုငျ ညီမြှစှာပေါငျးစပျထားတဲ့ မဇငျရဲ့ ရီဝဝေ မကျြလုံး ဝိုငျးဝိုငျးလေးနှငျ့ ကွညျ့ရငျ ဟိုး ငယျစဉျထဲက သူ့ခဈြနတေဲ့ မဇငျဟာ ခုခြိနျထိ သူ့မကျြစိထဲမယျ ခဈြစရာကောငျးနဆေဲပေ…သူ့အရမျးနမျးခငျြခဲ့တဲ့ မဇငျရဲ့ နှုတျခမျးပါးလေးတှဟော သူ့အတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနခေဲ့ပွီ…သူဘယျကဘယျလို စပွီး မဇငျကိုခဈြရမယျမသိဖွဈနသေညျ….သူ့ ဘဝမှာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကွိမျ…သူမဇငျဆံပငျတှထေဲ သူ့နှာခေါငျးကို သှငျးလိုကျပွီး တဝကွီးနမျးရှုံလိုကျသညျ…နောကျတော့ မ ဇငျနားရှကျနုနုလေး…မဇငျ လညျတိုငျလေးဆီရောကျတော့ မဇငျရငျဘကျလေးကော့သှားပွီး
စိုးတဇေ ခါးလေးနှဈဖကျက ဆှယျတာ စကို ဆှဲလိုကျလသေညျ….မဇငျရဲ့ ကိုယျသငျးနံ့လေးတှကေ သူ့ကိုပိုခဈြလာစသေညျ…မဟုတျဘူး….သူ့ကို ရူးနှမျးသှား စသေညျ….နမျးနရေငျး ခဈြလိုကျတာမဇငျရယျ…မဇငျလညျတိုငျလေးကနေ မဇငျရငျဘကျလေးဆီ ဆှယျတာ လညျပငျးဟိုကျလေး ကို ဆှဲပွီး စုပျလိုကျသညျ….သူဆှယျတာကိုမခြှတျရကျ….မခြှတျရဲတာပိုမှနျသညျ…. ဇငျမိုးသူလညျး စိုးတဇေ ဆှယျတာဆှဲခြှတျ လိုကျလြှငျလညျး သူခြှတျပေးမညျဖွဈသညျ…ဒါပမေယျ့ သူရှကျသညျ….မခြှတျပါစနေဲ့လို့လညျး ကွိတျဆုတောငျးနမေိသညျ… နောကျအခါတှတေော့ သူအသငျ့ဖွဈခငျြဖွဈနမေညျ…ဒီတဈခေါကျတော့ သူအသငျ့မဖွဈသလိုခံစားရလသေညျ….စိုးတဇေ ဘယျ ဆကျနမျးရမှနျးမသိတော့ မဇငျရဲ့ အောကျနှုတျခမျးလေးကို တဈခါပွနျလာနမျးလသေညျ…မဇငျရဲ့ နှာခေါငျးက လနှေေးလေးတှဟော စိုးတဇေအတှကျ ဆနျးသဈနပွေီး တကျမတျမိစှာ နှုတျခမျလေးအားစုပျယူရငျး ရှုရှိုကျနမေိသညျ….ထို့နောကျ ကိုယျလုံးခငျြခှာ လိုကျကွပွီး…
တဇေ…မဇငျ မငျးအတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ…မဇငျ မငျးကိုလညျး ခဈြနမေိပါပွီ… ဇငျမိုးသူ ဖွညေငျးတိုး တိတျစှာ စိုးတဇေကို ပွောလိုကျလပွေီး ခေါငျးလေး ဆိုဖာကြောမီဖကျကို စောငျးနလေိုကျသညျ…စိုးတဇေလညျး သူ့ဘောငျးဘီရှညျ ကို ခြှတျလိုကျလသေညျ… ထို့နောကျ…. ဇငျမိုးသူဆှယျတာလေးကို ဗိုကျလေးနားအနညျးငယျလှနျလိုကျကာ…. ဗိုကျသားခပျြခပျြ လေးကို နမျးစုပျလိုကျလသေညျ….ထို့နောကျ အတူးလေး ကိုမှေးတုနျးက ခှဲထားသညျ့ ခြုပျရိုးနရောလေးကို တဈခကျြနမျးလိုကျ ပွီး…. ဇငျမိုးသူ့ ဘောငျးဘီရှညျလေးကို အောကျကို ဖွေးဖွေးခငျြးဆှဲခလြိုကျသညျ…ဇငျမိုးသူလညျး ဖငျလေးကွှပေးပွီး ဆိုဖာလေး ဘေးမှာ ဒူးထောကျလကျြအလုပျရှုပျနသေညျ့ စိုးတဇေကို ကွညျ့ရငျး…ရငျခုနျနသေညျ…..ဘောငျးဘီရှညျကြှတျသှားတော့ ကနျြခဲ့ သညျ့…အတှငျးခံလေးကို မွငျတော့….
တဈသကျမှာတဈခါမှ မလုပျဖူးတာ ကို စိုးတဇေလုပျမိလိုကျသညျ…အတှငျးခံလေးပျေါကနေ နမျးလိုကျလသေညျ….ပွီးနောကျ အတှငျးခံလေးကို ဆှဲခြှတျလိုကျခြိနျ ဆီးစပျကအမှေးကပျကပျလေးတှမွေငျတော့ စိုးတဇေ အာခေါငျထဲ ခွောကျကပျသှားလသေညျ…ဇငျမိုးသူလညျး မကျြနှာကို တဈဖကျလှဲထားပွီး လကျက ယောကျပွီး ဆိုဖာကို တငျးတငျး ကွပျကွပျကိုငျထားမိလသေညျ…. စိုးတဇေတဈယောကျ ဒီအရှယျထိ ဘယျမိနျးမနဲ့မှ မနဖေူးသူမို့….ကွားသာကွားဖူးပမေယျ့ ဒီလို နရောနမျးရှုံကွသညျကို သူအံ့သွဖူးသညျ….ခုခြိနျမှာတော့ သူနားလညျလိုကျသညျ….ခဈြရငျ ဘာကိုမဆို ခဈြမိသှားတာပဲလို့ သိ လိုကျသညျ့အပွငျ ငုံထားမတတျခဈြတယျ ဆိုတဲ့ စကားကွီး ဘယျကနဘေယျလိုရောကျလာတယျမသိ…ငုံထားမတတျဆိုတာ အတှေးထဲလညျနကော…နောကျဆုံး သူငုံ့ကာ မဇငျရဲ့ အမှေးလေးတှနေဲ့ ဆီးစပျနရောအနှံ့ကို နှုတျခမျးလေးနဲ့ လိုကျဖိလိုကျလေ သညျ… ဇငျမိုးသူလညျး ရငျခေါငျးထဲက ယားကြိကြိနှငျ့ တှနျ့လိမျကာ ပေါငျကိုစိကာထားလသေညျ…..
နာလို့လား မဇငျ ဇငျမိုးသူ တှနျ့လိမျကာ ပေါငျစိထားသညျကိုကွညျ့ပွီးစိုးရိမျးကာ မေးလိုကျသညျ… ဇငျမိုးသူလညျး ရုတျတရကျကွောငျသှားကာ သူ အကွောကျလှနျနပေုံကို ပွနျမွငျပွီး…စိုးတဇေစိုးရိမျနသေညျ့မကျြနှာကွီးကွောငျ့လညျး ရီခငျြသှားသညျ… မဟုတျပါဘူး တဇေရယျ နှုတျခမျးနဲ့ လိုကျနမျးနတော ဘယျလိုနာမှာလဲ ကွောကျလို့ မဇငျကွောကျရငျ မလုပျတော့ဘူးလေ….ကြှနျတျော…… စိတျမကောငျး မဖွဈပါနဲ့ မဇငျနားလညျပါတယျ…တဇေက လူပြိုလေးပဲကိုး….မဇငျကိုလညျး နားလညျပေးပါ…..ဘဝမှာ ခုခြိနျထိ ဒါ မဇငျအတှကျ ဒုတိယအကွိမျဆိုတာကို…. စိုးတဇေ စိတျမကောငျးဖွဈသှားသညျ…ဒုတိယအကွိမျဆိုပမေယျ့….မဇငျအဖို့ ပထမအကွိမျနဲ့ ဘာမှ ကှာမညျမထငျ… မဖွဈဘူး ငါယောကျကြားလေးပဲ မဇငျကိုငါကပဲ ဦးဆောငျမှဖွဈမယျ… ကြှနျတျောစိတျလှုပျရှားနလေို့ပါ… ငယျ ငယျတုနျး မဇငျကို ကြှနျတေျာ့စိတျထဲကနေ ခဈြကွညျ့ဖူးပါတယျ..
အဲ့အတိုငျး ပွနျတှေးပွီး ခဈြကွညျ့မယျနျော….. မဇငျ ပေါငျကွား လေးထဲ သူဝငျကာ သူ့လီးကို တလေို့ကျသညျ…မဇငျတဈခကျြတှနျ့သှားသညျ…မကျြလုံးမှိတျကာ အံကွိတျထားလသေညျ….ထိပျ လေးနဲ့ အထပျအောကျပှတျပေးနတေော့ အရညျလေးတှေ စိမျ့လာတာတှတေ့ော့…မဇငျပွီးသှားပွီထငျလိုကျသညျ….မဖွဈနိုငျ သူ အပွာစာအုပျ ဖတျဖူးသညျ….ဒါ အစဦးထှကျတဲ့ သဘာဝခြောဆီပဲဖွဈမညျ…ဖွေးဖွေးခငျြး သှငျးလိုကျလသေညျ…အရညျလေးတှေ စိမျ့စိမျ့ထှကျလာတာကွောငျ့သာ အဆငျပွောသှားသညျ….သို့သျော မဇငျထဲကို သှငျးရသညျမှာ ကွပျထုတျလသေညျ….စိုး တဇေ တဝကျလောကျသှငျးပွီးတော့ သူခါးလေးကို လှုပျကွညျ့သညျ….ဇငျမိုးသူ အံကိုကျရငျး သူ့ကိုစိုကျကွညျ့နသေညျ ပွီးတော့ ခေါငျးလေးညိမျ့ညိမျ့ပွလသေညျ….စိုးတဇေလညျး ဆကျလုပျဖို့ ပွောတာလို့နားလညျလိုကျပွီး ပွနျထုတျပွနျထညျ့ရငျးနဲ့ ဇငျမိုးသူ ဆီးစပျနှငျ့ သူ့ဆီးစပျတို့ ထိဆကျသှားလသေညျ…ဇငျမိုးသူရဲ့ ပေါငျ နှဈဖကျမှာလညျး ဘေးကို ခွလေေးကှေးကာ ကားထားလပွေီ… ဇငျမိုးသူ ပေါငျကွားထဲ စိုးတဇေ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ရောကျရှိနပွေီလေ….
ဇငျမိုးသူ စိုးတဇေဆှယျတာကို လှနျခြှတျလိုကျလသေညျ….စိုး တဇေလညျး အလိုကျသငျ့ ခြှတျလိုကျပွီး ဆိုဖာပျေါလကျပွနျထောကျက အသှငျးအထုတျကို ကောငျးကောငျးလုပျနပွေီ ဖွဈသညျ….သှငျးလိုကျတိုငျး သူ့လီးတဈခြောကျလုံး တငျးကွပျပွီး ဖွဈညှဈ စုပျယူ တာခံစားရပီး ပွနျထုတျလိုကျတိုငျး ဒဈနဲ့ ညိထိ သှားတဲ့ အတှငျးသာအဖုအထဈတှရေဲ့အရသာကွောငျ့ လူလညျး ဒူးတှခြေောငျကာ မြော့လာလသေညျ။ ဇငျမိုးသူစိတျထဲ မငျးသူရိနျ ကို သတိသှားသညျ…စိုးတဇေဘာလို့ အငျနဲ့အားနဲ့ မဆောငျ့တာပါလိမျ့…ကိုမငျးနဲ့ ပထမအကွိမျတုနျးက ကိုမငျး ဆောငျ့ခကျြတှကေ နောကျနထေိ့အောငျ့နသေညျ….ငါက အပြိုမဟုတျတော့ စိုးတဇေ စိတျမပါတာလား….ငါ့ဟာမြားခြောငျနလေို့လား သူဘာဖွဈနေ တာပါလိမျ့…. တဇေ မဇငျဟိုဟာကလေ ခြောငျနပွေီလားဟငျ…မဇငျက အပြိုမဟုတျတော့…မငျးစိတျထဲ အားမရဘူးထငျ….
စိုး တဇေ မဇငျ နှုတျခမျးလေးကို လကျညှိုလေးနဲ့ ပိတျလိုကျပွီး…. မဇငျ ကြှနျတျောက မဇငျ နာမှာစိုးလို့….စသှငျးသှငျးခငျြးတုနျးက မဇငျ အံကွိတျနတောတှတေ့ော့…အရမျးမလုပျရဲတာ…ကြှနျတျော အရမျးကောငျးနတေယျ….ပွီးတော့ မဇငျဟာလေးက အရမျး ကွပျနတေယျ…ကြှနျတေျာ့ အရညျတှထှေကျတော့မယျထငျတယျ….မဇငျစိတျပကျြမှာကိုတောငျ စိုးရိမျနတောပါ… ဇငျမိုးသူ သဘောပေါကျသှားလပွေီ…အျော စိုးတဇေရယျ ရိုးပါလား… တဇေ အမတို့ နှဈယောကျလုံးကောငျးနကွေတယျ….မငျးစိတျထဲရှိ သလို ခဈြပါ…အမ ခံနိုငျမှာပါ…မငျးပွီးခငျြရငျပွီးခလြိုကျ…အမလညျး ပွီးမယျထငျပါတယျ…တို့နှဈယောကျရဲ့ ပထမအကွိမျ ပဲ….အမနားလညျပါတယျ….စိတျမပူနဲ့ နောကျထပျနသေ့ဈတှရှေိသေးတယျနျော…. ဇငျမိုးသူ့စကားကွောငျ့ စိုးတဇေ ပေါ့ပါးသှား ကာ…လကျရှိအတိုငျး တငျးကွပျနသေညျ့ ဇငျမိုးသူ အထဲကို အားထညျ့ကာ ထိုးသှငျးကာ ခပျပွငျးပွငျး ဆငျ့ကာဆောငျ့လိုကျ သညျ….ဇငျမိုးသူလညျး ပွနျပငျ့ကာခံပေးနတောမို့…ဆောငျ့သူ စိုးတဇေတဈယောကျ အားပိုရှိလာလသေညျ….
ဇငျမိုးသူဂုတျလေး ကို သိုငျးဖကျကာ ကိုယျခငျြးထပျပွီး ဆကျတိုကျ ဖိသှငျးဖိသှငျးရငျးနဲ့ နှဈယောကျသား ပွိုငျသူ မောဟိုကျသံမြား ကယျြလာကွပွီး စိုး တဇေ သုတျရညျမြား ဇငျမိုးသူ အတှငျးကို ဖိကပျပွီး ပနျးထုတျလိုကျလသေညျ…..ဇငျမိုးသူလညျး ရငျထဲ တဈမြိုးကွီးနဲ့ အမွငျ့ကနေ ပွုတျကသြှားသလိုရငျ အေးစကျသှားသလိုခံစားလိုကျရသညျ…ပွီးသှားတာလား…ကောငျးတာပဲလား…သူမသခြော..ဒါပမေယျ့ သူ အဲ့ခံစားခကျြကို ကွိုကျနှဈသကျမိလသေညျ…သို့သျော လောလောဆယျ သူတျောတျော နုံးကသြှားသလိုလညျးခံစားလိုကျရသညျ…. ဒါကွောငျ့ဇငျမိုးသူလညျး စိုးတဇေ ကြောပွငျကို ပွနျဖကျကာ ခန်ဓာကိုယျ နှဈခု တျောတျောလေးကွာအောငျ ကပျထားကွလေ သညျ…. နောကျမှ စိုးတဇေ သညျ…ဇငျမိုးသူ ကိုယျလုံးလေးကို အိပျခနျးထဲပှခြေီ့သှားလသေညျ။ သူနိုးလာပွီပဲ…မောငျသကျပွငျး မောငျသကျပွငျး….
ကြှနျတျောဘယျရောကျနတောလဲ ကြှနျတေျာ့ သနေတျရော….မငျးသူရိနျရုတျတရကျထထိုငျကာ ဘေးမှာ သနေတျရှိသညျအထငျနှငျ့ စမျးလိုကျလသေညျ…ခေါငျးထဲမှ မိုကျခနဲဖွဈပွီး ပွနျလဲကသြှားလသေညျ။ တဲလေးထဲမှ မောငျသကျ ပွငျးအား ဘေးပတျပတျလညျမှ လူမြား ဝိုငျးကွညျ့နကွေလသေညျ…ထိုထဲမှ အသကျ ၂၂ နှဈအရှယျ ကောငျမလေးတဈယောကျ ပွတငျးပေါကျနားထသှားကာ ပါးစပျကို လကျဝါးဖွငျ့ပိတျကား ငိုရှိုကျနသေညျ… ကနျြလူမြားသညျ စိုငျးကံဖ လို့ချေါသညျ့ လူကွီး တဈဦးကို ဝိုငျးကွညျ့လသေညျ…. ရှာလူကွီး ဦးစိုငျးကံဖလညျး သကျပွငျးပူကွီးသာ ခကြာ တဈနေ့ ဖွဈလာမယျထငျပမေယျ့ ခု လောကျမွနျမယျမထငျထားပေ….. တကယျတော့ မောငျသကျပွငျးသညျ မငျးသူရိနျဖွဈလသေညျ…မောငျသကျပွငျးမှာ… နမျ့စလပျ ရှာလေးမှ ရှာသားတှေ ပေးထားသညျ့နာမညျဖွဈသညျ…..ဒီနာမညျရလာပုံကလညျး လှနျခဲ့တဲ့ ၅နှဈက မွဈငယျမွဈထဲကနမြေော လာတဲ့ သူု့ကို ခေါငျပါတယျဆိုတဲ့ နမျ့စလပျဆိုတဲ့ တောငျခွရှောလေးက နမျးလောဝျခမျးတို့ရှာသူတှေ ရခေပျရငျးတှပွေီ့း ရှာသား တှေ ဝိုငျးပွီးဆယျထားကာ ရှငျလို့ရှငျငွား….
ရိုးရာဆေးဝါးမြားနဲ့ ကုသထားပွီး သတိပွနျလညျလာတော့ အတိတျမနေ့တောကလှဲပွီး လူကောငျးလို့ နထေိုငျလုပျကိုငျကာ….ရှာထဲ စာသငျ ဆေးကု တံတားဆောကျ အိမျပွငျ အကုနျဦးဆောငျ၊ ဝိုငျးလုပျရငျး ရှာသား လုံးလုံးဖွဈနသေညျ….လှနျခဲ့တဲ့ ခွောကျလကမှ မောငျသကျပွငျးနှငျ့ နမျးလောဝျခမျး တို့ နှဈဦးနှဈဖကျခဈြကွိုကျသဖွငျ့ ရှာကလူ တှကေ လကျထပျပေးခဲ့ကွလသေညျ…. ထို့နှငျ့ လှနျခဲ့သညျ့ ၂ ရကျက ကိုယျဝနျနှငျ့ နမျးလောဝျခမျးအတှကျ အိမျသာသှားရ အဆငျပွအေောငျ အိမျနှငျ့ကပျအောငျ ပွနျပွငျဆောကျရငျး ပွုတျကကြာ ခေါငျးကှဲပွီး မမွေ့ော နကော ယနမှေ့ ပွနျသတိရလာ သညျ….သတိရလာတော့ နမျ့စလပျရှာသား မောငျသကျပွငျး ဘဝကို မသှေ့ားလပွေီ…… ဦးစိုငျးကံဖ စကားဆုံးတော့ သူရူးခငျြသှား သညျ…. ၅နှဈ တောငျရှိနပွေီ…..ခေါငျးထဲ မိဘတှ ရှိကွသေးရဲ့လား….သူ့ရဲဘျောရဲဖကျတှေ ခွုံခိုတိုကျခံရလို့ သကွေတောတှေ…ဇငျ လေး…ခဈြသူ….သူ…ဇငျလေးကို ပေးခဲ့တဲ့ စာ….. ဟာ….
အား………….. သူတကယျသသှေားခဲ့ရငျကောငျးမှာပဲ…..ဆိုပွီး အာခေါငျ ခွဈကာ အိမျပွငျထှကျကာအျောလိုကျလသေညျ…… မန်တလေး – ရနျကုနျ ရထားပျေါတှငျး မငျးသူရိနျတဈယောကျ သူ့ဘဝ အကွောငျးပွနျတှေးရငျး မန်တလေးမှာ သူ့အိမျကိုမပွနျဘဲ ရနျကုနျရောကျနတေဲ့ သူ့ညီနဲ့ သူ့ခဈြသူ လငျမယား အိမျလိပျစာလေး စုံစမျးခဲ့ ပွီး အစုနျဆငျးလာခဲ့လသေညျ…. လိပျစာထဲက လမျးထဲ ဝငျလာခဲ့ပွီး…..ခွံအမှတျကိုတှတေ့ော့ ခမျးလှမျးလှမျးကနေ ခွံထဲ စညျးရိုး သံတိုငျမြားကွားမှ အကဲခတျလိုကျလသေညျ…. ၄နှဈအရှယျ ခလေးလေးတဈယောကျ သနေတျတဈလကျနဲ့ ဖဖေေ ဒိုငျးဒိုငျးဆိုပွီး လိုကျပဈနသေညျ…ဖဖေဆေိုသူမှာ စိုးတဇေ ဖွဈနပွေီး… သူတို့ဆော့နပေုံကို ဘေးကနေ မပေါ့မပါးကွီးဖွငျ့ ကွညျ့ကာရီမောနေ သညျ့ အမြိုးသမီးမွငျတော့… ဇငျလေး…. ရုတျတရကျ ပွေးထှကျသှားမိပွီးမှ သူ့ကိုယျသူပွနျသတိထားလိုကျသညျ…
မငျးသူရိနျ ရငျခေါငျးထဲက နာကငျြစှာ ငိုမိနသေညျ….. ခဏကွာတော့မှ သူ့စိတျသူထိမျးကာ ငါသိပျခဈြရတဲ့ ငါ့ညီနဲ့ ငါ့အသကျထကျခဈြရတဲ့ ခဈြသူတို့ ပြျောရှငျနကွေပွီပဲ….ဒါကလညျး ငါဖွဈစခေငျြခဲ့တဲ့ ဆန်ဒ တဈခုပါပဲလေ…ငါကံပဲ….မငျးတို့အတှကျ ငါဝမျးသာပါ တယျ…..ရငျထဲမယျ စကားမြား တဈယောကျထဲပွောရငျ မကျြရညျမြား တလိမျ့လိမျ့ကလြာသညျ။ မငျးသူရိနျ ခွစေုံရပျကာ တဈ ခကျြတှေးလိုကျသညျ….အငျး..ငါဘာလုပျသငျ့လညျး….သူဖွဈရပျတှအေစအဆုံးပွနျ သုံးသပျလိုကျသညျ.. နောကျဆုံးမှာတော့ သူ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုကို နာကငျြစှာခလြိုကျပမေယျ့….ဒါသူ့အလုပျသငျ့ဆုံး လုပျရပျလို့လညျး သူသခြောသိသညျ….ငါ့ကိုမြှျောနေ မယျ့…လိုအပျနတေဲ့ သူတဈယောကျရှိတယျ…ဘဝဆိုတာ ပွညျ့စုံနတေဲ့နရောထကျ လိုအပျနတေဲ့ နရောကို ကှကျလပျဖွညျ့တာ ကောငျးပါတယျလေ…. ဟု ဆုံးဖွတျခကျြ ပွကျပွကျသားသား ခကြာ ခွံနားမှထှကျလာခဲ့လိုကျလသေညျ။
မွနေီလမျးလေးရဲ့ မကျြလုံးတဈဆုံးမှာ တဈရှရှေ့နေဲ့ သူ့ဆီကို ဦးတညျလာနသေူတဈယောကျကို နနျးလောဝျခမျးတှေ့ လိုကျလေ သညျ…မကျြဝနျးထဲက မကျြရညျတှခေိုဆငျးလာပမေယျ့…ပြျောရှငျလို့ကရြတဲ့မကျြရညျတှဖွေဈသညျ….သူ့ရငျထဲ အပူတှေ ငွိမျးခမျြး သှားကာ…လုံးစပွုနသေညျ့ဗိုကျကလေးကို ပှတျကာ… သားသားမီးမီးလေးရေ ဖကွေီးပွနျလာပွီ နျော ဗိုကျထဲကနေ မငိုနဲ့တော့ နျော….
ရင်ဘတ် အတွင်းက ကွက်လပ်လေးတစ်ခု
မဇင်…အတူးလေးအိပ်သွားပြီလား… အိပ်သွားပြီတေဇ…မင်းရော မအိပ်သေးဘူးလား… ဧည့်ခန်းထဲရှိထင်းမိုးဖိုလေးရှေ့တွင် မီးဖို ကအလင်းရောင်ရယ် နံရံကပ်မီးအဝါလေးတွေရဲ့ မစို့မပို့ အလင်းရောင်ထဲ မွေးပွကော်ဇော်ပေါ်ထိုင်ကာ ဆိုဖာကိုမီထားသည့် စိုး တေဇ အမေးကိုဖြေလည်းဖြေသလို ဇင်မိုးသူ အနိမ့်သံလေးဖြင့် ပြန်လည် မေးလိုက်လေသည်… စိုးတေဇလည်း အသားဖြူဖြူ မှာ နက်ပြာရောင်ဆွယ်တာလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လှတဲ့ ဇင်မိုးသူကို မော့ကြည့်နေရင်း… အကြည့်ပြန်လွဲလိုက်ကာ ကျွန်တော်စဉ်းစား နေတာ…မဇင်တို့သားအမိဘာလို့ ပြင်ဦးလွင်ကိုလိုက်လာတာလည်းလို့ အမကိုတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါလား တေဇ မှန်စားပွဲပု ပေါ်ရှိ စိုးတေဇသောက်လက်စ ဝိုင်ပုလင်းနှင့် ဖန်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်ကာ စိုးတေဇမီထားသည့် ဆိုဖာပေါ်တွင် ညှင်သာစွာ ထိုင်ချလိုက်သည်…ပိန် ပါးသွယ်လျတဲ့ မဇင်ခန္ဓာကိုယ်လေဟာ ဆိုဖာပေါ်ကြွကြွလေးဖြင့် အရုပ်လေးတင်ထားသလို လှပ နေသည်… စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူကို ခေါင်းငြိမ့်ပြကာ ခါးဆန့်ရင်း ထမင်းစားခန်းက ဝိုင်ဖန်ခွက် တစ်ခွက်ထယူကာ ဝိုင်ငှဲ့ပေးပြီး ဇင်မိုးသူကို ပေးလိုက်လေသည်….ဇင်မိုးသူ ဖန်ခွက် တစ်ဝက်စာ ဝိုင်ကို ဆက်တိုက်တစ်ကျိုက်ထဲ မော့သောက်လိုက်ရာ…မျက်နှာ လေးများ သွေးရောင်လွှမ်းတက်သွားလေသည်…ပြီးနောက်…
ဒီနေ့ ကိုမင်း… မဇင်အသံလေးတုန်ဝင်သွားပြီး သူကိုယ်တိုင် ဝို င်ထပ်ငှဲ့ကာ ၂ ငုံစာလောက်သောက်ချလိုက်ပြီး ဖန်ခွက်ကိုင်ထား သည့်လက်များ တုန်နေကာ…မျက်ရည်စက်များ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျလာလေသည်…. စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူလက်ထဲမှ ဝိုင်ခွက် ကို အေးစက်နေသည့်လက်ချောင်းရှည်ရှည်လေးတွေကို ဖွဖွလေးဖယ်ကာ ယူလိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်တင်ပြီး…. ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ကို မင်းဆုံးတာ ၄ နှစ်ပြည့်တယ်…ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် မဇင်ရယ် ကျွန်တော် စိတ်လိုက်မာန်ပါ အိမ်ကထွက်မလာသင့်ဘူး…မ ဇင်တို့နားမှာနေပေးသင့်ပါတယ်…ကျွန်တော်ထွက်လာရ တယ်ဆိုတာကလည်း…ကျွန်တော်မရှိလည်း မဇင်တို့သားအမိ နေသားကျ လောက်ပြီထင်တာရယ်… ကျွန်တော့် နှလုံးသားကို စုတ်တံတွေကြား ထဲပြန်မြုပ်ထားပြီး ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် ကုစားဖို့အချိန် ယူချင်တာရယ်…နောက်ပြီး ဒီ ၄ နှစ်လုံးအတူနေသလို ဆက်မနေပေမယ့်လည်း အဝေးကနေစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့် ပါ…ကျွန်တော် မဇင်ကိုလည်း ဖွင့်မပြောဘဲထွက်လာခဲ့မိတာ မဇင်နဲ့ အတူးလေး ဝမ်းနည်းသွားရတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်…
စိုးတေဇ… ဇင်မိုးသူ ကို ဝမ်းနည်းစွာပြောလိုက်လေသည်…သူကိုသူလည်းစိတ်ထဲအပြစ်တင်နေမိလေသည်.. တကယ်တော့ ခုလို ထွက်လာရတာလည်း ကျွန်တော်….မ လုပ် ချင် ဆုံး အလုပ်ပါ မဇင်… စိုးသူရ မဇင်ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအပ်ကာ ရင်ထဲကနာကျင်နေပြီး ငိုသံမထွက်မိအောင်ထိမ်းရင်း အရှိုက်ပြင်းပြင်းအသက်ရှုနေသည်….စိုးတေဇသူ့မျက်ရည်တွေကိုတော့ မထိမ်းနိုင်… ဇင်မိုးသူ သည်.. သူ့ချည်သား ဘောင်းဘီပေါ်ကျလာတဲ့ စိုးတေဇ မျက်ရည်ပူတွေကို ခံစားမိလေသည်…. ဇင်မိုးသူ စိုးတေဇ ခေါင်းကိုမော့ စေလိုက်ပြီး…ကြည့်ကာပြောလိုက်သည်… တေဇ နောက် မဇင်နဲ့ အတူးလေးကို ထားခဲ့ပြီးထွက်မသွားပါနဲ့…တေဇသွားချင်တဲ့ဆီရှိ ရင်လည်း အမတို့ သားအမိကို ခေါ်သွားပါ…ဒါ မဇင်ရင်ထဲပြောတာပါ တေဇခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပြီး…
ဟုတ်ကဲ့ပါမဇင်…ကျွန်တော် ကတိပေးပါတယ် လာ ဆိုဖာပေါ်တက် ခွက်ချင်းတိုက်ရအောင်… စိုးသူရလည်း ရင်ထဲ မွန်းကြပ်သည်များ ခဏတာ ပေါ့သွားသလို ခံစားရပြီး အပျော်လေးများ ရုတ်တရက် ခုန်ပေါက်ဝင်လာသည်ဟု ခံစားမိလေသည်… ဝိုင်ခွက်တွေထဲ ဝိုင်ငှဲ့ကာ ဇင်မိုးသူကို တစ် ခွက်ပေးပြီး သူ ကိုယ်တိုင်တစ်ခွက်ကိုင်ကာ.. မခွဲကြေး ဆိုကာ မဇင်ပြောသလိုလိုက်ပြောပြီး ဖန်ခွက်ချင်း တိုက်ကာ မော့သောက် လိုက်ကြလေသည်.. တေဇကို မဇင်မေးစရာရှိတယ်…အမှန်တိုင်းဖြေရမယ်နော် စိုးတေဇ ခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း ဇင်မိုးသူ မေးမှာကို စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်လိုက်သည်… မင်း မဇင်ကို ဘယ်တုန်းထဲက စိတ်ဝင်စားနေတာလည်း စိုးတေဇ အာစေးများကပ်သွား သည်…တကယ်တော့ဒီမေးခွန်းက သူ့အတွက် အလွယ်ဆုံးမေးခွန်း…သူ ၆ တန်းမတက်ခင် ၊မဇင် သည် ၉တန်းမတက်ခင်ဖြစ်သည့် နွေရာသီ မှာ မဇင်တို့မိသားစု သူတို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကိုပြောင်းလာကြတယ်…
အရင်က မဇင်မေမေနဲ့ စိုးတေဇတို့မေမေနှင့် နယ်မှာတစ်ကျောင်းထဲအတူပြီးခဲ့ကြတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေ…မဇင်တို့ မိသားစု မန္တလေးပြောင်းလာမယ်ဆိုတော့ စိုး တေဇတို့ အမေတိုက်တွန်းမှုကြောင့် ရှေ့ခြံကိုဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်သည်…မဇင် မေမေနဲ့ မဇင်ရယ် အိမ်တက်ဖိတ်စာလေးလာ ပေးတဲ့နေ့ သူလှေကားအပေါ်ကနေမဇင်ကိုချောင်းခဲ့တယ် .. ဆံပင်ရှည်လေးကို နောက်လှန်ကာ ဘီးကုတ်ပန်းရောင်လေးကုတ်ထား ပြီး ပန်းရောင် တီရှပ်လေးရယ်…အောက်ဖက်က အဖြူရောင် ခြေသလုံးလောက်ထိရှိသည့် စကပ်လား ဂါဝန်ခေါ်မလား ပွပွလေး ရယ် ရိုးရိုးလေးနဲ့ သူ့မျက်စိထဲချစ်စရာကောင်းနေသည့် အမတစ်ယောက်…ပြီးတော့ စိုးတေဇရဲ့ အချစ်တော် ကြောင်းဝတုတ် ဖိုးဝါ လေး ကို ပေါင်ပေါ်တင်ကာ ပွတ်ပေးနေသည်။
သူ့လိုကြောင်ချစ်တတ်တဲ့ အမ။ ခြံထဲက ဒန်းအဖြူလေးပေါ် ဖိုးဝါလေးကို ချီသွားပြီး စီးကာ ပျော်နေတဲ့ မဇင်ကို အိမ်ပေါ်ထပ်မှန်ပြတင်းကချောင်းနေစဉ် သူ့ရင်ထဲ နွေးထွေးသွားတာလား ရင်ခုန်သွားတာလားမသိ ရုတ်ခြည်းအမည်နာမ တတ်မရအောင်ခံစားမှုအသစ်ခံစားလိုက်ရလေသည်……ဒါတွေ သူ မဇင်ကို စီကာပတ်ကုံးပြောပြလိုက်ချင် သည်…..တကယ်တော့ ဟိုးအရင် သူနှင့် မဇင် လက်မထပ်ခင် ၄ နှစ်မတိုင်ခင် ၈နှစ် ၉ နှစ်လောက်ထဲကပြောပြချင်ခဲ့သည်…ပြောခွင့် မရခဲ့။ သူ့ကိုယ်သူ ထိမ်းသိမ်းထားခဲ့သည်က ပိုမှန်သည်။
ခုမေးလေပြီ…သူဆက်ထိမ်းထားသင့်သလား…ပြောလိုက်သင့်ပြီလား… တွေဝေနေသည်…ရုတ်တရက် မဇင်ကို အသက်ထက်ချစ် သည့် အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုမင်းသူရိန် မျက်နှာကိုလည်း မြင်မိလေသည်….. စိုးတေဇ ဝိုင်တစ်ကျိုက်သောက်လိုက်ကာ သူ့ခြေထောက် ကိုသူကြည့်ရင်း ဇင်မိုးသူမျက်ဝန်းတွေကို ရှောင်ကာတိတ်ဆိတ် နေလေသည်…ဇင်မိုးသူ… စိုးတေဇ ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည် သဖြင့်…သူ့ဖက်ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသင့်ပြီဟုတွေးကာ… စိုးတေဇ လက်ကိုကိုင်ကာ… တေဇအနေနဲ့ ဖြေရခက်နေ ရင်…ကိုမင်း နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့နေ့က သူပေးခဲ့တဲ့ စာလေးကိုဖတ်ပြီးမှ တေဇစိတ်ထဲရှိတဲ့အဖြေကိုပေးပါ…မဇင်လည်း ဒီစာ ဖတ်ပြီးတော့ တေဇ့ဆီလိုက်လာခဲ့တာပဲ…ရော့
ဇင်မိုးသူ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲမှ စာအိတ်သေးသေးလေးကို စိုးတေဇ လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်…စာအိတ်လေးပေါ်တွင် ဇင်လေး တကယ်လို့ အကိုပြန်မလာလို့ ၃ နှစ်ကြာရင် ဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး ရေးထားလေသည်။ ခု ၄နှစ်ရှိပြီ…မဇင် ဒီစာကို ၄ နှစ်ထိစောင့်ပြီးမှဖတ်ခဲ့ တာပဲ …ဘာပါလိမ့် ဇင်လေး… ဇင်လေးဒီစာကိုဖတ်နေပြီဆိုရင် ကိုမင်း ဒီလောကထဲကနေ အပြီးပျောက်ကွယ်သွားလို့ ၃ နှစ်ရှိနေ ပြီပေါ့။ အရင်ဆုံး ဇင်လေးကို ကိုမင်း အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတာယုံပါ။ ဇင်လေးနား တစ်သက်လုံး နေပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ မတည်နိုင်တာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုမင်း မရှိတဲ့နောက် ဇင်လေး အတွက် ကိုမင်းစိတ်အချရဆုံးနဲ့ ဇင်လေးကို ကိုမင်းလို ချစ်ပေးနိုင်မယ့်သူဆိုလို့ ညီလေး စိုးတေဇပဲရှိမယ်လို့ ကိုမင်း ထင်တယ်။ ဇင်လေး အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင် စိုးတေဇကို ပဲ ရွေးစေချင်ပါတယ်။ စိုးတေဇ ဇင်လေးကို ချစ်နေတယ်ဆိုတာ အကိုသိတယ်။
တမလွန်ကနေ ဆက်ချစ်နေမယ့် ကိုမင်း စာဆုံးတော့ စိုးတေဇ သက်ပြင်းချကာ ဇင်မိုးသူအမေးကိုဖြေလိုက်လေသည်….ဖြေမယ် ဆိုကာမှ…စကားစဖို့ ခက်နေသည်…နောက်ဆုံးမှာ ရင်ထဲကစကားတွေ ပွင့်ထွက်လာလေသည်… ကျွန်တော် မဇင်ကို ချစ်နေတာ… မဇင်တို့ အိမ်တက်ဖိတ်စာလာပေးတဲ့နေ့ကထဲကပါ….ကိုမင်း က ကျောင်းဖွင့်ခါနီး ရန်ကုန်ကကြီးတော်တို့အိမ်ကနေပြန်လာတော့ မ ဇင်ကိုတွေ့ပြီး မဇင်လှကြောင်းနဲ့ သူစိတ်ဝင်စားနေကြောင့် ညတိုင်းအိပ်ခါနီးတိုင်း မရိုးနိုင်အောင် ကျွန်တော့်ကိုပြောခဲ့တယ်…ကို မင်းကို ကျွန်တော်သနားတယ်…မေမေကဆိုအမြဲပြောတယ်…သူ့သားကြီးဟာတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကံမကောင်းရှာ ဘူးတဲ့ မိဘတွေ စည်းပွားရေးပျက်တာနဲ့ ချိန်ကိုက်ဖြစ်ပြီး…နေထိုင်စားသောက် ချို့တဲ့ခဲ့တယ်တဲ့…ကျောင်းလည်း တစ်နှစ်နားခဲ့ရတယ် တဲ့….ကျွန်တော့်ကိုယ်ဝန်ရလာချိန်မှာ စီးပွားရေးပြန် တက်လာခဲ့ပြီး အဖေက ငါ့သားလေးပေးတာ ငါ့သားလေးပေးတာဆိုပြီး သူ့ ရှေ့မှာပြောနေပေမယ့် ကိုမင်းက ပြုံးပြီးအမြဲကြည့်နေခဲ့တဲ့…
မနာလိုလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော့်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ တယ်…ကျွန်တော် ကိုမင်းကို သူချစ်သလိုအရမ်းချစ်တယ်…ကျွန်တော့်ရင်ထဲ မဇင်ရောက်နေပေမယ့် ကိုမင်းကလည်း မဇင်ကို ရူးမ တက်ဖြစ်နေတာမြင်ရတော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကောင်မလေးတွေ ခံစားလို့မရတော့မှန်းသေချာသိနေတယ် ဒါပေမယ့် မဇင်ကို ကိုမင်းနဲ့ကြည်ဖြူစွာသဘောတူပေးခဲ့တာပါ…မဇင်တို့ ကိုမင်းတို့ပျော်နေတာမြင်ရင် ကျွန်တော်လိုက်ပျော်နိုင်အောင်ပဲ ကြိုးစားခဲ့ တယ်… စကားအဆုံး.. စိုးတေဇ မီးဖိုထဲ ထင်းချောင်းများထည့်ရင်း နာရီတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်….. ၀၀း၀၅ ဇင်မိုးသူ အနည်းငယ်ချမ်းသလိုဖြစ်လာတာမို့ လက်မောင်းလေးတွေကို ပွတ်ပြီး ထလာကာ မီးဖို့ရှေ့ထိုင်ချ လိုက်ပြီး လက်ကို မီးလှုံကာ… ဒါဆို ၆ တန်းကထဲက မင်း မဇင်ကို သဘောကျနေတာပေ့ါ…ဒါကြောင့်လည်း မဇင် ကိုမင်းရဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိ နေပြီဆိုတာမင်းသိတာနဲ့ ခိုး ပြေးပြီး မဇင်အရှက်ကို မင်းဘဝနဲ့ လဲပေးဖို့ ဝန်မလေးခဲ့တာပေါ့…ဟုတ်လား..
စိုးတေဇလည်း ဇင်မိုးသူဘေးနား ဝင်ထိုင် လိုက်ကာ…ဝိုင်ခွက်လေးကမ်းပေးလိုက်သည်…သူလည်းမော့လိုက်သည်… အဲ့တုန်းက အခြေအနေက အရမ်းရှုပ်နေတယ်…ကို မင်းဆုံးလို့ ၂ လကျော်မှာ မဇင် ကျွန်တော့်ကိုလာပြောတော့ ကျွန်တော်တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ်…တုန်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတာ မဇင်အနေနဲ့ ကိုမင်းမရှိဘဲ ဘယ်လိုမွေးမလဲဆိုတာပဲ…ရှင်းရှင်းပြောရရင် မဇင်နဲ့ ကိုမင်းတို့ ဆုံဖို့ ကျွန်တော် ပဲ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတာ လေ…အဲ့တော့ ဒီအတူးလေး လူဖြစ်ဖို့က ကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သတ်နေတယ်… ပြီးတော့ ကိုမင်း သွေးကိုမွေးစေချင်တယ်…ဒါပေ မယ့် ကိုမင်းက တိုက်ပွဲမှာကျနေချိန် အလောင်းပြန်မရပေမယ့် ဗုန်းထိပြီးမသေရင်တောင် မြစ်ငယ်မြစ်ထဲ ကျလို့ သေဖို့များတယ်ဆို ပြီး တပ်ရင်းက တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး ကိုယ်တိုင်အိမ်လာပြောသွားတာဆိုတော့….
ကျွန်တော်ခေါင်းထဲရှိတာကတော့ မဇင်ကို ကျွန်တော် ခိုးပြေးမယ်…လက်ထပ်ချင်တယ် ခွင့်တောင်းလည်းမဇင်ခွင့်ပြုမှာမှမဟုတ်တာ…ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အဲ့တုန်းက မဇင်ကိုခိုးပြေး ခဲ့တာ…ဒါတွေကြောင့်ဆိုပြီးပြောပြဖို့ ဆိုတာကလည်း… မဇင်ရယ်…ပြန်ပြောရင် ကိုမင်းကို အရမ်းသတိရတယ်…ကျွန်တော်ရင်ထဲ မကောင်းလို့… အဲ့တုန်းကလည်း မဇင်အပါအဝင် မိဘ သူငယ်ချင်း အားလုံး ဘယ်လိုပဲထင်ထင်ဂရုမစိုက်ဘဲ စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပါ….အဲ့အတွက်နောင်တမရပါဘူး….ကျန်တာကတော့ ကျွန်တော့်ကံပေါ့…
ဇင်မိုးသူ ရင်ထဲနင့်သွားသည်…ဒီ ၄ နှစ်လုံး သူ့ရင်ထဲကစကားတွေ တခွန်းမှမဟဘဲ ကိုမင်းနဲ့ သူ့သားလေးကိုလည်း တူဆိုတာထက် တောင်ပိုပြီး သားအရင်းလိုသူချစ်ခဲ့တယ်…နာမည်ခံပေးခဲ့တယ်…တကယ်ဆို အရှက်တကွဲဖြစ်ရမှာက သူ..ဒါပေမယ့် သူ့အစား စိုး တေဇက အားလုံးရဲ့ အပြောအဆိုကိုခံကာ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်ကို မန္တလေးကနေ သူ့ကိုခေါ်ထုတ်ခြဲ့ပီး သူဝါသနာပါ တဲ့ ပန်းချီဆွဲတာကို ဆက်မလုပ်ဘဲ သူတို့သားအမိကို လိုလေသေးမရှိစောင့်ရှောက်ထားပေးခဲ့တယ်….သူ့ကိုလည်း အစ်မတစ် ယောက်လို လက်ဖျားနဲ့မတို့ဘဲ စည်း စောင့်ပေးခဲ့တာတွေ အပျော်အပါးအသောက်အစား နဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေအတွက် အချိန် လုံးဝအကုန်အမခံဘဲ
သူတို့ နဲ့သာ အချိန်ကုန်ပြီး အတူးလေး နေမကောင်းချိန် တစ်ခါတစ်ရံသူနေ မကောင်းချိန်တွေမှာ အနားကမ ခွာဘဲပြုစုပေးခဲ့တာတွေဟာ တော်ရုံ သံယောဇဉ် မေတ္တာတရားနဲ့ မလုပ် ပေးနိုင်မှန်း ဇင်မိုးသူ ခံစားမိသည်….ငယ်ရွယ်တဲ့၊ မိန်းကလေးတွေ သဘောကျတဲ့ ၊ ဝါသနာပါတဲ့အလုပ် စတဲ့ အချိန်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ စွန့်ပြီး သူ့တို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့တစ်ခုထဲနဲ့ လဲရဲခဲ့တဲ့ စိုးတေဇကို သူမြင်တိုင်းနေစဉ် သနားသလို သံယောဇဉ်လည်း တွယ်မိလေသည်…သူ ကိုမင်းကို ချစ်သည်….ဒါကြောင့် လည်း ကိုမင်းရှေ့တန်းမထွက်ခင် သူ့ဘဝကို ကိုမင်းဆီပေးခဲ့မိသည်။
ကိုမင်း တပ်ရှိရာမြို့ကို စိုးတေဇကားမောင်းပို့ပေးကာ သွားခဲ့ကြပြီး… ဟော်တယ်လေးမှာ နှစ်ဦးသား စကားတွေအလွမ်းတွေ သယ် ရာကလေ မရည်ရွယ်ဘဲ အချစ်တွေဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ ကွန်ဒုံးမပါပေမယ့် ကိုမင်း အပြင်မှာ ပြီးလိုက်တာကို ယုံကြည်ပြီး ဆေးမ သောက်မိခဲ့။ တကယ်တော့ ကိုမင်းစစ်ထဲဝင်တော့ သူတားချင်သည်…ဒါပေမယ့် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်က လူနာတွေနယ်ခြား က တောသူတောင်သားတွေ အတွက် ရန်သူ မိတ်ဆွေမခွဲခြားဘဲ ငွေကြေးကြောင့်မဟုတ် အာဏာကြောင့်မဟုတ် သူဆေးကုပေး ချင်တယ်ဆိုပြီး သူ့ဟီးရိုး Hacksaw Ridge လိုဆိုကာ စစ်ဆေးထဲ ဝင်သွားခဲ့သည်…. စာချုပ်အတိုင်း စစ်သက် ၁၀ နှစ်ပြည့်ရင် တော့ တပ်ကထွက်ပြီး သူနဲ့ အတူတူ နေကြမယ်ဆိုတဲ့ကတိစကားလေးရယ်… သူ့ရဲ့လေးစားဖွယ်စိတ်ဓါတ်ကို သူမတားချင်တော့ ဖြစ်လာသမျှကံတရားလို့သာသူမှတ်ခဲ့သည်…ကံက သူနဲ့ ကိုမင်းကိုခွဲလိုက်လေပြီ….
ခုသူဘာဆက်လုပ်သင့် သလဲ သားလေး အတူး ကလည်း စိုးတေဇကို အဖေရင်းလိုချစ်နေတယ်…အဖေလိုပဲထင်နေတယ်… အားလုံးကလည်း မင်းတူးတူးအဖေသည် စိုးတေဇလို့ပဲ သိထားကြသည်….စိုးတေဇကလည်း သူနဲ့သားလေးကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ ခံစားမိတယ်…ထိုအချိန် စိုးတေဇက သူ့ကို စိတ်တွေ အနည်ထိုင်လောက်ပြီဆိုကာ သူ့ကိုမြင်ရင် ကိုမင်းကို သတိရစိတ်ပိုခံစားရမယ်ဆိုပြီး….အိမ်ကထွက်သွားတော့ သူ့ရင်ထဲ ရုတ်တရက် သူ့ကမ္ဘာလေးပြိုကွဲသွားသလိုခံစားရပြီး ဒီနှစ်တွေ ကိုမင်းအစား စိုးတေဇကိုအားကိုးရင်းအားကိုးရင်းနဲ့ ရင်ထဲမှာ ငြိတွယ်မိလာသည်ကို သိသိသာသာခံစားမိသွားသည်…. တေဇ မင်း မဇင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာ ဘာနဲ့သက်သေပြမလဲ ဇင်မိုးသူ သူ့ ကိုသနားလို့ ဒါမှမဟုတ် သူ့အကိုစကားနားထောင်ပြီး လက်ခံလိုက်တာမျိုးတော့ မလိုချင်…သူဖက်ကဆုံးဖြတ်ထားတာရှိသည်…သူ စိုးတေဇရဲ့ ချစ်မေတ္တာတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးချင်မိသည်။
သူ့အချစ်တွေကို ပိတ်လှောင်ထားတာကနေ တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး သူရယ် စိုးတေဇရယ် သားလေး မင်းတူးတူးရယ် ၃ ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘာနံရံမှခြားမထားဘဲ လက်ကျန် ဘဝလေးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြမယ်လို့ တစ်လမ်းလုံးတွေးလာမိသည်။ ဒါပေမယ့် စိုးတေဇ သူ့ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သေချာဖို့ တော့ သူ့အတွက်အရေးကြီးသည်…မသေချာလျှင် စိုးတေဇ ဘဝအတွက် သူ ပြန်ကြည့်ပေးသင့်ပြီ…စိုးတေဇ ပြမယ့် သက်သေကို သူစောင့်နေလိုက်သည်…. စိုးတေဇ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး… မဇင်ခဏစောင့် ဆိုကာ အိမ်ပေါ်တက်သွားလေသည်….ဒီပြင်ဦးလွင် ကအိမ်လေးသည်…ကိုမင်းတို့ မိဘတွေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီး ကိုမင်းရန်ကုန်စစ်ဆေးကဆင်းပြီး ပြင်ဦးလွင် မှာသင်တန်းတက်ချိန်တွေ မှာ မိသားစုတွေလာတွေ့ဖို့နဲ့ ကိုမင်း နားဖို့ ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်သည်။ စိုးတေဇရဲ့ ပန်ချီးခန်းလေးလည်းရှိလေသည်။….. စိုးတေဇ ပြန် ဆင်းလာတော့ လက်ထဲ ပုံဆွဲ စာအုပ်ခပ်ကြီးကြီးပြားပြား တစ်အုပ်ပါလာသည်….ဇင်မိုးသူကို လှမ်းပေးလိုက်လေသည်…
ဇင်မိုး သူ ပထမဆုံးစာမျက်နှာဖွင့်လိုက်ရာ…ခဲပန်းချီဖြင့် ဘီးကုတ်လေးနဲ့ကောင်မလေးတစ်ယေက် ဒါန်းလေးပေါ်မှာ ကြောင်ဝတုတ်လေး ပေါင်ပေါ်တင်ပြီး ပြုံးပြီးထိုင်နေတဲ့ ပုံလေးကိုတွေ့လေသည်…. ပန်ချီကာလေးထောင့်မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူ…ဆိုပြီး ရက်စွဲလေးနှင့် ရိုးရိုးလေး ရေးထားလေသည်…. ဇင်မိုးသူ ရင်ထဲလှိုက်ခနဲဖြစ်သွားလေသည်….ဒါသူ့ပုံ အဲ့အချိန်ထဲက သူ့ကိုချစ်နေခဲ့တာလား စိုး တေဇရယ်…မင်းမျိုသိပ်ထားရတာဘယ်လောက်တောင် များပြီလဲ ကြာနေပြီလဲကွယ်…. ဇင်မိုးသူ စာအုပ်လေးကို ဘေးကိုချကာ စိုးတေဇကို လှမ်းဖက်လိုက်လေသည်…..ပြီးနောက် စိုးတေဇ မျက်နှာကိုကြည့်ကာ…. တေဇ မင်း မဇင်ကို စကားတစ်ခွန်းပြောပါ လို့ပြောရင် ခုချိန် မင်းဘာပြောမလဲ…ဟင် စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူမျက်လုံးတွေထဲက မျက်ရည်ကြည်လေးတွေ ကိုမြင်ရချိန်…သူ့ရင်ထဲ …အနှစ်နှစ်အလလ သူစောင့်ထိမ်းခဲ့တဲ့ စကားတစ်ခွန်း အတွက် အတားအဆီးတွေ အရည်တွေပျော်ကျ ကုန်ပြီ…. ကျွန်တော် လေ…မ ဇင် ကို….ချစ်တယ်….ဟိုးအရင်ထဲကရော…အခုရော…နောက်ရော…ချစ်နေဦးမှာပါ
မဇင်မျက်ရည်များ ကျလေပြီ…စိုး တေဇ လက်မလေးနှစ်ဖက်နဲ့ ပါးပြင်ပေါ် စီးကျသမျှ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးလေသည်….မဇင်ရဲ့ ရှိုက်ကြိးတငင်ငိုနေတာ ကြောင့် တသိမ့်သိမ့်တုန်ရီနေတဲ့ မဇင် ကိုယ်လုံးသေးသေးလေးကို သူ့ရင်ခွင်ထဲထွေးပွေ့ထားလိုက်လေသည်….မဇင် နဖူးလေးကို သူနမ်းချလိုက်သည်….မဇင်မျက်နှာလေးမော့လာပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်လုံးချင်းစိုက်ကြည့်နေရင်း စိုးတေဇ ခေါင်း လေး ငုံဆင်းလာသည်ကို မြင်တော့ ဇင်မိုးသူ မျက်လုံးလေးမိတ်ပြီး ငြိမ်နေလိုက်သည်….စိုးတေဇ နှုတ်ခမ်းတွေ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို လာထိတော့ သူ့ရင်ထဲ ခုန်တက်သွားလေသည်….အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ အနမ်းတွေ ဒီနှစ်တွေမှာ သူလည်း တောင်းတနေခဲ့တာပါ…ကို မင်းလည်း သူ့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါ…သူ့အတွေးပေါင်းများစွာကြောင့် နှုတ်ခမ်းတွေ တင်းတင်းစိထားမိလေသည်…..စိုးတေဇလည်း ဇင် မိုးသူ စိတ်ဆိုးသွားပြီထင်ကာ နှုတ်ခမ်းခြင်းခွာပြီး ဇင်မိုးသူကို ကြည့်လိုက်သည်….ဇင်မိုးသူမျက်လုံးလေးပွင့်လာပြီး…စိုးတေဇကို ဖြေးဖြေးလေးတွန်းလှဲလိုက်ပြီး စိုးတေဇအပေါ် သူ့ ကိုယ်လုံးလေးထပ်ကာ အပေါ်ကနေ ငုံပြီး စိုးတေဇ နှုတ်ခမ်းတွေကို နမ်းလိုက် လေသည်…
ဝိုင်ကြောင့်စိတ်လှည့်စားနေခြင်းမဟုတ်သည်မှာ ဇင်မိုးသူသေချာသည် သူ့ရင်ခုန်သံရော စိုးတေဇရင်ခုန်သံရော နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေ စဉ် ကြားနေမိသည်…စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူကို ဖက်ထားရင်း ထထိုင်လိုက်သည်….ဇင်မိုးသူ ဖားလေးလိုကပ်လျှက်လေး စိုးတေဇ ကိုယ် မှာကပ်နေသည်…အနမ်းတွေက တော့လုံးဝမလွှတ်နိုင်ကြပေ…စိုးတေဇ ဇင်မိုးသူ ကိုယ်လုံးပေါ့ပေါ့လေးကို ပင့်သွားပြီး ဆိုဖာပေါ် တင်ပေးလိုက်လေသည်…ထို့နောက် အချစ်နဲ့ဝိုင် ညီမျှစွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ မဇင်ရဲ့ ရီဝေဝေ မျက်လုံး ဝိုင်းဝိုင်းလေးနှင့် ကြည့်ရင် ဟိုး ငယ်စဉ်ထဲက သူ့ချစ်နေတဲ့ မဇင်ဟာ ခုချိန်ထိ သူ့မျက်စိထဲမယ် ချစ်စရာကောင်းနေဆဲပေ…သူ့အရမ်းနမ်းချင်ခဲ့တဲ့ မဇင်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေဟာ သူ့အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ…သူဘယ်ကဘယ်လို စပြီး မဇင်ကိုချစ်ရမယ်မသိဖြစ်နေသည်….သူ့ ဘဝမှာ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ်…သူမဇင်ဆံပင်တွေထဲ သူ့နှာခေါင်းကို သွင်းလိုက်ပြီး တဝကြီးနမ်းရှုံလိုက်သည်…နောက်တော့ မ ဇင်နားရွက်နုနုလေး…မဇင် လည်တိုင်လေးဆီရောက်တော့ မဇင်ရင်ဘက်လေးကော့သွားပြီး
စိုးတေဇ ခါးလေးနှစ်ဖက်က ဆွယ်တာ စကို ဆွဲလိုက်လေသည်….မဇင်ရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေက သူ့ကိုပိုချစ်လာစေသည်…မဟုတ်ဘူး….သူ့ကို ရူးနှမ်းသွား စေသည်….နမ်းနေရင်း ချစ်လိုက်တာမဇင်ရယ်…မဇင်လည်တိုင်လေးကနေ မဇင်ရင်ဘက်လေးဆီ ဆွယ်တာ လည်ပင်းဟိုက်လေး ကို ဆွဲပြီး စုပ်လိုက်သည်….သူဆွယ်တာကိုမချွတ်ရက်….မချွတ်ရဲတာပိုမှန်သည်…. ဇင်မိုးသူလည်း စိုးတေဇ ဆွယ်တာဆွဲချွတ် လိုက်လျှင်လည်း သူချွတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်…ဒါပေမယ့် သူရှက်သည်….မချွတ်ပါစေနဲ့လို့လည်း ကြိတ်ဆုတောင်းနေမိသည်… နောက်အခါတွေတော့ သူအသင့်ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမည်…ဒီတစ်ခေါက်တော့ သူအသင့်မဖြစ်သလိုခံစားရလေသည်….စိုးတေဇ ဘယ် ဆက်နမ်းရမှန်းမသိတော့ မဇင်ရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို တစ်ခါပြန်လာနမ်းလေသည်…မဇင်ရဲ့ နှာခေါင်းက လေနွေးလေးတွေဟာ စိုးတေဇအတွက် ဆန်းသစ်နေပြီး တက်မတ်မိစွာ နှုတ်ခမ်လေးအားစုပ်ယူရင်း ရှုရှိုက်နေမိသည်….ထို့နောက် ကိုယ်လုံးချင်ခွာ လိုက်ကြပြီး…
တေဇ…မဇင် မင်းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ…မဇင် မင်းကိုလည်း ချစ်နေမိပါပြီ… ဇင်မိုးသူ ဖြေညင်းတိုး တိတ်စွာ စိုးတေဇကို ပြောလိုက်လေပြီး ခေါင်းလေး ဆိုဖာကျောမီဖက်ကို စောင်းနေလိုက်သည်…စိုးတေဇလည်း သူ့ဘောင်းဘီရှည် ကို ချွတ်လိုက်လေသည်… ထို့နောက်…. ဇင်မိုးသူဆွယ်တာလေးကို ဗိုက်လေးနားအနည်းငယ်လှန်လိုက်ကာ…. ဗိုက်သားချပ်ချပ် လေးကို နမ်းစုပ်လိုက်လေသည်….ထို့နောက် အတူးလေး ကိုမွေးတုန်းက ခွဲထားသည့် ချုပ်ရိုးနေရာလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက် ပြီး…. ဇင်မိုးသူ့ ဘောင်းဘီရှည်လေးကို အောက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချလိုက်သည်…ဇင်မိုးသူလည်း ဖင်လေးကြွပေးပြီး ဆိုဖာလေး ဘေးမှာ ဒူးထောက်လျက်အလုပ်ရှုပ်နေသည့် စိုးတေဇကို ကြည့်ရင်း…ရင်ခုန်နေသည်…..ဘောင်းဘီရှည်ကျွတ်သွားတော့ ကျန်ခဲ့ သည့်…အတွင်းခံလေးကို မြင်တော့….
တစ်သက်မှာတစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတာ ကို စိုးတေဇလုပ်မိလိုက်သည်…အတွင်းခံလေးပေါ်ကနေ နမ်းလိုက်လေသည်….ပြီးနောက် အတွင်းခံလေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်ချိန် ဆီးစပ်ကအမွှေးကပ်ကပ်လေးတွေမြင်တော့ စိုးတေဇ အာခေါင်ထဲ ခြောက်ကပ်သွားလေသည်…ဇင်မိုးသူလည်း မျက်နှာကို တစ်ဖက်လွှဲထားပြီး လက်က ယောက်ပြီး ဆိုဖာကို တင်းတင်း ကြပ်ကြပ်ကိုင်ထားမိလေသည်…. စိုးတေဇတစ်ယောက် ဒီအရွယ်ထိ ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ မနေဖူးသူမို့….ကြားသာကြားဖူးပေမယ့် ဒီလို နေရာနမ်းရှုံကြသည်ကို သူအံ့သြဖူးသည်….ခုချိန်မှာတော့ သူနားလည်လိုက်သည်….ချစ်ရင် ဘာကိုမဆို ချစ်မိသွားတာပဲလို့ သိ လိုက်သည့်အပြင် ငုံထားမတတ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကြီး ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတယ်မသိ…ငုံထားမတတ်ဆိုတာ အတွေးထဲလည်နေကာ…နောက်ဆုံး သူငုံ့ကာ မဇင်ရဲ့ အမွှေးလေးတွေနဲ့ ဆီးစပ်နေရာအနှံ့ကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ လိုက်ဖိလိုက်လေ သည်… ဇင်မိုးသူလည်း ရင်ခေါင်းထဲက ယားကျိကျိနှင့် တွန့်လိမ်ကာ ပေါင်ကိုစိကာထားလေသည်…..
နာလို့လား မဇင် ဇင်မိုးသူ တွန့်လိမ်ကာ ပေါင်စိထားသည်ကိုကြည့်ပြီးစိုးရိမ်းကာ မေးလိုက်သည်… ဇင်မိုးသူလည်း ရုတ်တရက်ကြောင်သွားကာ သူ အကြောက်လွန်နေပုံကို ပြန်မြင်ပြီး…စိုးတေဇစိုးရိမ်နေသည့်မျက်နှာကြီးကြောင့်လည်း ရီချင်သွားသည်… မဟုတ်ပါဘူး တေဇရယ် နှုတ်ခမ်းနဲ့ လိုက်နမ်းနေတာ ဘယ်လိုနာမှာလဲ ကြောက်လို့ မဇင်ကြောက်ရင် မလုပ်တော့ဘူးလေ….ကျွန်တော်…… စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ မဇင်နားလည်ပါတယ်…တေဇက လူပျိုလေးပဲကိုး….မဇင်ကိုလည်း နားလည်ပေးပါ…..ဘဝမှာ ခုချိန်ထိ ဒါ မဇင်အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတာကို…. စိုးတေဇ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားသည်…ဒုတိယအကြိမ်ဆိုပေမယ့်….မဇင်အဖို့ ပထမအကြိမ်နဲ့ ဘာမှ ကွာမည်မထင်… မဖြစ်ဘူး ငါယောက်ကျားလေးပဲ မဇင်ကိုငါကပဲ ဦးဆောင်မှဖြစ်မယ်… ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ပါ… ငယ် ငယ်တုန်း မဇင်ကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကနေ ချစ်ကြည့်ဖူးပါတယ်..
အဲ့အတိုင်း ပြန်တွေးပြီး ချစ်ကြည့်မယ်နော်….. မဇင် ပေါင်ကြား လေးထဲ သူဝင်ကာ သူ့လီးကို တေ့လိုက်သည်…မဇင်တစ်ချက်တွန့်သွားသည်…မျက်လုံးမှိတ်ကာ အံကြိတ်ထားလေသည်….ထိပ် လေးနဲ့ အထပ်အောက်ပွတ်ပေးနေတော့ အရည်လေးတွေ စိမ့်လာတာတွေ့တော့…မဇင်ပြီးသွားပြီထင်လိုက်သည်….မဖြစ်နိုင် သူ အပြာစာအုပ် ဖတ်ဖူးသည်….ဒါ အစဦးထွက်တဲ့ သဘာဝချောဆီပဲဖြစ်မည်…ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းလိုက်လေသည်…အရည်လေးတွေ စိမ့်စိမ့်ထွက်လာတာကြောင့်သာ အဆင်ပြောသွားသည်….သို့သော် မဇင်ထဲကို သွင်းရသည်မှာ ကြပ်ထုတ်လေသည်….စိုး တေဇ တဝက်လောက်သွင်းပြီးတော့ သူခါးလေးကို လှုပ်ကြည့်သည်….ဇင်မိုးသူ အံကိုက်ရင်း သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည် ပြီးတော့ ခေါင်းလေးညိမ့်ညိမ့်ပြလေသည်….စိုးတေဇလည်း ဆက်လုပ်ဖို့ ပြောတာလို့နားလည်လိုက်ပြီး ပြန်ထုတ်ပြန်ထည့်ရင်းနဲ့ ဇင်မိုးသူ ဆီးစပ်နှင့် သူ့ဆီးစပ်တို့ ထိဆက်သွားလေသည်…ဇင်မိုးသူရဲ့ ပေါင် နှစ်ဖက်မှာလည်း ဘေးကို ခြေလေးကွေးကာ ကားထားလေပြီ… ဇင်မိုးသူ ပေါင်ကြားထဲ စိုးတေဇ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရောက်ရှိနေပြီလေ….
ဇင်မိုးသူ စိုးတေဇဆွယ်တာကို လှန်ချွတ်လိုက်လေသည်….စိုး တေဇလည်း အလိုက်သင့် ချွတ်လိုက်ပြီး ဆိုဖာပေါ်လက်ပြန်ထောက်က အသွင်းအထုတ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်နေပြီ ဖြစ်သည်….သွင်းလိုက်တိုင်း သူ့လီးတစ်ချောက်လုံး တင်းကြပ်ပြီး ဖြစ်ညှစ် စုပ်ယူ တာခံစားရပီး ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ဒစ်နဲ့ ညိထိ သွားတဲ့ အတွင်းသာအဖုအထစ်တွေရဲ့အရသာကြောင့် လူလည်း ဒူးတွေချောင်ကာ မျော့လာလေသည်။ ဇင်မိုးသူစိတ်ထဲ မင်းသူရိန် ကို သတိသွားသည်…စိုးတေဇဘာလို့ အင်နဲ့အားနဲ့ မဆောင့်တာပါလိမ့်…ကိုမင်းနဲ့ ပထမအကြိမ်တုန်းက ကိုမင်း ဆောင့်ချက်တွေက နောက်နေ့ထိအောင့်နေသည်….ငါက အပျိုမဟုတ်တော့ စိုးတေဇ စိတ်မပါတာလား….ငါ့ဟာများချောင်နေလို့လား သူဘာဖြစ်နေ တာပါလိမ့်…. တေဇ မဇင်ဟိုဟာကလေ ချောင်နေပြီလားဟင်…မဇင်က အပျိုမဟုတ်တော့…မင်းစိတ်ထဲ အားမရဘူးထင်….
စိုး တေဇ မဇင် နှုတ်ခမ်းလေးကို လက်ညှိုလေးနဲ့ ပိတ်လိုက်ပြီး…. မဇင် ကျွန်တော်က မဇင် နာမှာစိုးလို့….စသွင်းသွင်းချင်းတုန်းက မဇင် အံကြိတ်နေတာတွေ့တော့…အရမ်းမလုပ်ရဲတာ…ကျွန်တော် အရမ်းကောင်းနေတယ်….ပြီးတော့ မဇင်ဟာလေးက အရမ်း ကြပ်နေတယ်…ကျွန်တော့် အရည်တွေထွက်တော့မယ်ထင်တယ်….မဇင်စိတ်ပျက်မှာကိုတောင် စိုးရိမ်နေတာပါ… ဇင်မိုးသူ သဘောပေါက်သွားလေပြီ…အော် စိုးတေဇရယ် ရိုးပါလား… တေဇ အမတို့ နှစ်ယောက်လုံးကောင်းနေကြတယ်….မင်းစိတ်ထဲရှိ သလို ချစ်ပါ…အမ ခံနိုင်မှာပါ…မင်းပြီးချင်ရင်ပြီးချလိုက်…အမလည်း ပြီးမယ်ထင်ပါတယ်…တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမအကြိမ် ပဲ….အမနားလည်ပါတယ်….စိတ်မပူနဲ့ နောက်ထပ်နေ့သစ်တွေရှိသေးတယ်နော်…. ဇင်မိုးသူ့စကားကြောင့် စိုးတေဇ ပေါ့ပါးသွား ကာ…လက်ရှိအတိုင်း တင်းကြပ်နေသည့် ဇင်မိုးသူ အထဲကို အားထည့်ကာ ထိုးသွင်းကာ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆင့်ကာဆောင့်လိုက် သည်….ဇင်မိုးသူလည်း ပြန်ပင့်ကာခံပေးနေတာမို့…ဆောင့်သူ စိုးတေဇတစ်ယောက် အားပိုရှိလာလေသည်….
ဇင်မိုးသူဂုတ်လေး ကို သိုင်းဖက်ကာ ကိုယ်ချင်းထပ်ပြီး ဆက်တိုက် ဖိသွင်းဖိသွင်းရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်သူ မောဟိုက်သံများ ကျယ်လာကြပြီး စိုး တေဇ သုတ်ရည်များ ဇင်မိုးသူ အတွင်းကို ဖိကပ်ပြီး ပန်းထုတ်လိုက်လေသည်…..ဇင်မိုးသူလည်း ရင်ထဲ တစ်မျိုးကြီးနဲ့ အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျသွားသလိုရင် အေးစက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်…ပြီးသွားတာလား…ကောင်းတာပဲလား…သူမသေချာ..ဒါပေမယ့် သူ အဲ့ခံစားချက်ကို ကြိုက်နှစ်သက်မိလေသည်…သို့သော် လောလောဆယ် သူတော်တော် နုံးကျသွားသလိုလည်းခံစားလိုက်ရသည်…. ဒါကြောင့်ဇင်မိုးသူလည်း စိုးတေဇ ကျောပြင်ကို ပြန်ဖက်ကာ ခန္ဓာကိုယ် နှစ်ခု တေ်ာတော်လေးကြာအောင် ကပ်ထားကြလေ သည်…. နောက်မှ စိုးတေဇ သည်…ဇင်မိုးသူ ကိုယ်လုံးလေးကို အိပ်ခန်းထဲပွေ့ချီသွားလေသည်။ သူနိုးလာပြီပဲ…မောင်သက်ပြင်း မောင်သက်ပြင်း….
ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေတာလဲ ကျွန်တော့် သေနတ်ရော….မင်းသူရိန်ရုတ်တရက်ထထိုင်ကာ ဘေးမှာ သေနတ်ရှိသည်အထင်နှင့် စမ်းလိုက်လေသည်…ခေါင်းထဲမှ မိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး ပြန်လဲကျသွားလေသည်။ တဲလေးထဲမှ မောင်သက် ပြင်းအား ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ လူများ ဝိုင်းကြည့်နေကြလေသည်…ထိုထဲမှ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်နားထသွားကာ ပါးစပ်ကို လက်ဝါးဖြင့်ပိတ်ကား ငိုရှိုက်နေသည်… ကျန်လူများသည် စိုင်းကံဖ လို့ခေါ်သည့် လူကြီး တစ်ဦးကို ဝိုင်းကြည့်လေသည်…. ရွာလူကြီး ဦးစိုင်းကံဖလည်း သက်ပြင်းပူကြီးသာ ချကာ တစ်နေ့ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပေမယ့် ခု လောက်မြန်မယ်မထင်ထားပေ….. တကယ်တော့ မောင်သက်ပြင်းသည် မင်းသူရိန်ဖြစ်လေသည်…မောင်သက်ပြင်းမှာ… နမ့်စလပ် ရွာလေးမှ ရွာသားတွေ ပေးထားသည့်နာမည်ဖြစ်သည်…..ဒီနာမည်ရလာပုံကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က မြစ်ငယ်မြစ်ထဲကနေမျော လာတဲ့ သူု့ကို ခေါင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နမ့်စလပ်ဆိုတဲ့ တောင်ခြေရွာလေးက နမ်းလောဝ်ခမ်းတို့ရွာသူတွေ ရေခပ်ရင်းတွေ့ပြီး ရွာသား တွေ ဝိုင်းပြီးဆယ်ထားကာ ရှင်လို့ရှင်ငြား….
ရိုးရာဆေးဝါးများနဲ့ ကုသထားပြီး သတိပြန်လည်လာတော့ အတိတ်မေ့နေတာကလွဲပြီး လူကောင်းလို့ နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကာ….ရွာထဲ စာသင် ဆေးကု တံတားဆောက် အိမ်ပြင် အကုန်ဦးဆောင်၊ ဝိုင်းလုပ်ရင်း ရွာသား လုံးလုံးဖြစ်နေသည်….လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်လကမှ မောင်သက်ပြင်းနှင့် နမ်းလောဝ်ခမ်း တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ချစ်ကြိုက်သဖြင့် ရွာကလူ တွေက လက်ထပ်ပေးခဲ့ကြလေသည်…. ထို့နှင့် လွန်ခဲ့သည့် ၂ ရက်က ကိုယ်ဝန်နှင့် နမ်းလောဝ်ခမ်းအတွက် အိမ်သာသွားရ အဆင်ပြေအောင် အိမ်နှင့်ကပ်အောင် ပြန်ပြင်ဆောက်ရင်း ပြုတ်ကျကာ ခေါင်းကွဲပြီး မေ့မြော နေကာ ယနေ့မှ ပြန်သတိရလာ သည်….သတိရလာတော့ နမ့်စလပ်ရွာသား မောင်သက်ပြင်း ဘဝကို မေ့သွားလေပြီ…… ဦးစိုင်းကံဖ စကားဆုံးတော့ သူရူးချင်သွား သည်…. ၅နှစ် တောင်ရှိနေပြီ…..ခေါင်းထဲ မိဘတွ ရှိကြသေးရဲ့လား….သူ့ရဲဘော်ရဲဖက်တွေ ခြုံခိုတိုက်ခံရလို့ သေကြေတာတွေ…ဇင် လေး…ချစ်သူ….သူ…ဇင်လေးကို ပေးခဲ့တဲ့ စာ….. ဟာ….
အား………….. သူတကယ်သေသွားခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲ…..ဆိုပြီး အာခေါင် ခြစ်ကာ အိမ်ပြင်ထွက်ကာအော်လိုက်လေသည်…… မန္တလေး – ရန်ကုန် ရထားပေါ်တွင်း မင်းသူရိန်တစ်ယောက် သူ့ဘဝ အကြောင်းပြန်တွေးရင်း မန္တလေးမှာ သူ့အိမ်ကိုမပြန်ဘဲ ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ သူ့ညီနဲ့ သူ့ချစ်သူ လင်မယား အိမ်လိပ်စာလေး စုံစမ်းခဲ့ ပြီး အစုန်ဆင်းလာခဲ့လေသည်…. လိပ်စာထဲက လမ်းထဲ ဝင်လာခဲ့ပြီး…..ခြံအမှတ်ကိုတွေ့တော့ ခမ်းလှမ်းလှမ်းကနေ ခြံထဲ စည်းရိုး သံတိုင်များကြားမှ အကဲခတ်လိုက်လေသည်…. ၄နှစ်အရွယ် ခလေးလေးတစ်ယောက် သေနတ်တစ်လက်နဲ့ ဖေဖေ ဒိုင်းဒိုင်းဆိုပြီး လိုက်ပစ်နေသည်…ဖေဖေဆိုသူမှာ စိုးတေဇ ဖြစ်နေပြီး… သူတို့ဆော့နေပုံကို ဘေးကနေ မပေါ့မပါးကြီးဖြင့် ကြည့်ကာရီမောနေ သည့် အမျိုးသမီးမြင်တော့… ဇင်လေး…. ရုတ်တရက် ပြေးထွက်သွားမိပြီးမှ သူ့ကိုယ်သူပြန်သတိထားလိုက်သည်…
မင်းသူရိန် ရင်ခေါင်းထဲက နာကျင်စွာ ငိုမိနေသည်….. ခဏကြာတော့မှ သူ့စိတ်သူထိမ်းကာ ငါသိပ်ချစ်ရတဲ့ ငါ့ညီနဲ့ ငါ့အသက်ထက်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူတို့ ပျော်ရွှင်နေကြပြီပဲ….ဒါကလည်း ငါဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒ တစ်ခုပါပဲလေ…ငါကံပဲ….မင်းတို့အတွက် ငါဝမ်းသာပါ တယ်…..ရင်ထဲမယ် စကားများ တစ်ယောက်ထဲပြောရင် မျက်ရည်များ တလိမ့်လိမ့်ကျလာသည်။ မင်းသူရိန် ခြေစုံရပ်ကာ တစ် ချက်တွေးလိုက်သည်….အင်း..ငါဘာလုပ်သင့်လည်း….သူဖြစ်ရပ်တွေအစအဆုံးပြန် သုံးသပ်လိုက်သည်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို နာကျင်စွာချလိုက်ပေမယ့်….ဒါသူ့အလုပ်သင့်ဆုံး လုပ်ရပ်လို့လည်း သူသေချာသိသည်….ငါ့ကိုမျှော်နေ မယ့်…လိုအပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်…ဘဝဆိုတာ ပြည့်စုံနေတဲ့နေရာထက် လိုအပ်နေတဲ့ နေရာကို ကွက်လပ်ဖြည့်တာ ကောင်းပါတယ်လေ…. ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ပြက်ပြက်သားသား ချကာ ခြံနားမှထွက်လာခဲ့လိုက်လေသည်။
မြေနီလမ်းလေးရဲ့ မျက်လုံးတစ်ဆုံးမှာ တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ သူ့ဆီကို ဦးတည်လာနေသူတစ်ယောက်ကို နန်းလောဝ်ခမ်းတွေ့ လိုက်လေ သည်…မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေခိုဆင်းလာပေမယ့်…ပျော်ရွှင်လို့ကျရတဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်သည်….သူ့ရင်ထဲ အပူတွေ ငြိမ်းချမ်း သွားကာ…လုံးစပြုနေသည့်ဗိုက်ကလေးကို ပွတ်ကာ… သားသားမီးမီးလေးရေ ဖေကြီးပြန်လာပြီ နော် ဗိုက်ထဲကနေ မငိုနဲ့တော့ နော်….
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ရငျဘတျ အတှငျးက ကှကျလပျလေးတဈခု